नियात्रा: The Journey Continues
A diary of Pedestrian on Mother Nature
Look deep in to The Mountains
The history of Mother Earth written on it.
Water dews make Flowers smile
The Planet turns to Life.
A diary of Pedestrian on Mother Nature.
प्रेम, आनन्द र उल्लासका रासायनिक प्रतिक्रिया
deepszeroAugust 16, 2021Hormones, Neuron, Physical and Mental Health, Physiology, Psychology No comments
हामी कहिले ओशो तपोवन तिर गएका छौँ भने हामीलाई थाहा छ होला, त्यहाँ सङ्गीतको तालमा बेस्सरी नाचिन्छ ता कि हाम्रो शरीर थाकेर लस्तपस्त होस्।अनि शवासनमा पल्टेर शान्त भए पछि ओशोको प्रवचन बजाइन्छ। यसै उनको मधुर र शान्त स्वर कता कता अनन्तमा गुञ्जीन्छ। त्यहाँ उनले भने जस्तै एक आनन्द स्थिरता अनुभव हुन्छ।शरीरमा उर्जा सञ्चार अर्थात् कतै कुण्डलिनि शक्ति मूलाधार देखि सहस्त्रार चक्रसम्म नृत्य गर्दै छ कि भन्ने लाग्छ।
पूर्वीय दर्शनको पतञ्जलि योग अन्तर्गत अष्टाङ्ग योगमा विभिन्न चरणहरू छन्। यो शारीरिक, मानसिक र आत्मिक शुद्धिकरणको एक मात्र प्रयोगात्मक बिधि हो भन्दा पनि फरक पर्दैन।यसै अनिसार मान्छे मुक्ति अर्थात बुद्धत्व प्राप्ति गर्न सक्छ भनिएको छ। यसका क्रमिक अङ्ग यसप्रकार छन्।
१.यम (अहिंसा, सत्यवादन, अस्तेय(चोरी नगर्नु), व्रम्हचर्य, अपरिग्रह(आवश्यकता भन्दा बढी संचय नगर्नु)
२.नियम (शरीर र मनको शुद्धि, सन्तुष्टि, अनुशासन, आत्मचिन्तन र प्रकृति प्रदत्तता)
३.आसन( योगासन र शारीरिक ब्यायाम द्वारा शरीरमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्नु)
४.प्राणायाम (श्वासप्रश्वासको अभ्यासले यसलाई पनि नियन्त्रण स्थापित गर्नु)
५.प्रत्याहार (ज्ञानेन्द्रीय र कर्मेन्द्रियहरु माथि नियन्त्रण स्थापित गर्नु)
६.धारणा (मन र मष्तिस्कमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्नु)
८.समाधि अर्थात मुक्ति अर्थात वुद्धत्व
यो प्रक्रिया क्रमिक रुपमा या चरणबद्ध रुपमा हुनुपर्छ भनेर अष्टाङ्ग योगले भन्छ। ध्यान भनेको पलेटी कसेर या जवर्जस्ती कुनै आसन चाहे बज्रासन होस् या सुखासन या पद्मासन घटित हुदैन। पहिला यम दोस्रो नियमको पालना गरे पछि बल्ल आसन अन्तर्गत शारीरिक ब्यायाम अनि प्राणायाम अन्तर्गत श्वासप्रश्वासको कडा मिश्रण पछि शरीर र मन दुवै स्वस्थ हुन्छन अनि मात्र प्रत्याहार मार्फत इन्द्रियको स्थिरता र धारणा अन्तर्गत मनको स्थिरता भए पछि मात्र ध्यान घटित हुन्छ।
अहिले धेरै आध्यात्मिक गुरुहरू देखि मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा हास्य चिकित्साको पनि प्रयोग गर्छन्, मज्जाले हाँस्ने, गाउने, भजनमा नाच्न लगाउने आदि शारीरिक क्रियाकलाप पनि खुब गराइन्छ। पतञ्जलि अष्टाङ्ग योगमा यसको रहस्य पाउन सकिन्छ। यम र नियमबाट अर्थात् खानपान र बानी व्यहोराबाट शरीर स्वस्थ भए पछि शुरू हुन्छ आसन र प्राणायाम जसले शरीरलाई भौतिकरुपमा थकाए पछि बल्ल ध्यानका प्रक्रिया शुरू हुन्छन्। त्यसै पलेटी कसेर आँखा चिम्म गर्दैमा ध्यान घटित हुँदैन।
कुण्डलिनी योगमा ओशो रजनीश भन्छन् कडा परिश्रमबाट भौतिक शरीर थकाए पछि बल्ल सुक्ष्म शरीर अर्थात् आन्तरिक शरीरको जागरण हुन्छ। कुण्डलिनी योग भन्ने पुस्तक हेर्ने हो भने त्यहाँ कयौँ तरिकाको वर्णन गरिएको छ जसको लक्ष्य भनेकै भौतिक शरीर मज्जाले थकाउनु हो।
म आफै मार्शल आर्टको अभ्यासी र साइकल यात्री भएकाले के स्पष्ट दावी गर्न सक्छु भने कुनै पनि कृतिम नशा भन्दा कडा शारीरिक परिश्रमले बढी आनन्ददायक नशा दिन्छ। त्यसैले त नशा दुर्व्यसनको उपचार गर्दा बढी शारीरिक परिश्रमलाई प्रमुख स्थान दिइन्छ।
अब प्रश्न आउँछ आनन्द, ध्यान आदि के आत्मा परमात्मा सङ्ग जोडिएका छन् त? यदि स्नायु विज्ञानको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रेम घृणा भक्ति देखि दुःख पीडा आनन्द ध्यान आत्मिक अनुभूति आदि सबै नितान्त शारीरिक प्रकृयाहरु हुन्। शरीरले आफैले उत्सर्जन गरेका केही रसायनहरू जसलाई हामी हर्मोन्स (Hormones) हरुको कार्य हो।
जति सुकै महानताको गफ गरे पनि, आत्मा परमात्मा सङ्ग जोडे पनि स्नायुबिज्ञान अनुसार, प्रेम पनि रिस, घृणा, भक्ति, करुणा जस्तै मानवीय संवेदना र ब्यबहार हो जसलाई मस्तिष्कको निर्देशनमा विभिन्न ग्रन्थिहरुले उत्सर्जन गर्ने निश्चित हर्मोनहरुको अर्थात रसायनहरुको कारणले नितान्त मान्छेको शरीरमा घटित हुने एक शुद्ध शारीरिक प्रक्रिया हो। यसमा आत्मा परमात्मा माहनता या नीचता केहि पनि छैन।
इन्डोर्फिन (Endorphin): धावकको नशा (the Runner's high)
तपाईँ लामो दूरी दौडिनु भएको छ? दुई चार किलोमिटर होइन अझै लामो दूरी दौडिसके पछि यस्तो लाग्छ समय भए अझै दुई चार किमि केही होइन। थकित शरीरमा एउटा अचम्मको उल्लास, उन्माद (Euphoria) उत्पन्न हुन्छ, एकाएक मन अल्हादित हुन्छ। त्यसलाई हामी Runner's high भन्छौँ। त्यो थकित शरीरमा एकाएक उल्लास ल्याउने के हो त? त्यो हो इण्डोर्फिन् (Endorphin) जुन हाम्रो शरीरको केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (Central Nervous System) पिट्युटरी ग्रन्थी (Pituitary Gland) को सहकार्यमा हाम्रो शरीरमा उत्सर्जित हुन्छ।
इण्डोर्फिनले अफिम अथवा मर्फिनले जस्तै हाम्रो शरीरमा कार्य गर्छ। कडा शारीरिक परिश्रमको कारणले शरीरको दुःखाईको सूचना मस्तिष्कमा पुग्छ मानव मस्तिष्कले त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप इण्डोर्फिनको उत्पादन गर्छ जुन प्राकृतिक रुपमा दुखाइ कम गर्ने रसायन हो। यो रक्त प्रणालीमा घुल्नासाथ मानिसलाई चरम उल्लासित बनाउँछ त्यसैले कडा शारीरिक परिश्रम गर्ने व्यक्ति लामो समय सम्म काम गर्न सक्ने, अवसाद (depression) र चिन्ता व्यग्रता (Anxiety) बाट मुक्त हुन्छ।
न्युरोट्रान्समिटर ((Neurotransmitter) के हुन्?
एक जना कडा शारीरिक अभ्यास गर्ने चाहे त्यो मार्शल कलाका अभ्यासी हुन् या जिममा पसिना बगाउने हुन्। योगाभ्यास गर्ने योगी हुन् या कुनै नृत्याङ्गना या कुनै लामो दूरीका धावक सबैले प्राप्त गर्ने उन्माद एउटै हो आनन्द एउटै हो किनकी सबैको शरीरमा उत्पन्न इन्डोर्फिन लगायतका न्युरोट्रान्समिटरहरु हुन्।
Neurotransmitter हरु त्यस्ता रासायनिक पदार्थ हुन् जसले विभिन्न किसिमका सूचनाहरू एक स्नायु तन्त्रिका बाट अर्को स्नायु तन्त्रिका सम्म पुर्याउने काम गर्छन्। हाम्रो शरीर भरिनै यस्ता तन्त्रिकाहरुको जाल हुन्छ। शरीरको एउटा तन्त्रिकाले सङ्केत या सूचनालाई विद्युतिय सङ्केतबाट रासायनिक सङ्केतमा बदल्छ त्यही रासायनिक सङ्केतलाइ अर्को तन्त्रीकाले प्राप्त गर्छ। यसरी हाम्रा इन्द्रीयहरूले सूचनाहरू मस्तिष्कमा पुर्याउँछन् अनि फेरि मस्तिष्कले तिनै सूचनाहरुको आधारमा प्रतिकृया जनाउँछ। ती प्रतिक्रियाका आधारमा मस्तिष्कले पनि तिनै तन्त्रिकाहरुको माध्यम हुँदै विभिन्न अङ्गहरूलाई सूचना , निर्देशनहरू दिन्छन्। त्यही सूचना सङ्केत बोकेका रासायनिक पदार्थलाई हामी neurotransmitter भन्छौ।
यिनीहरू जटिल रासायनिक संरचना भएका धेरै प्रकारका हुन्छन्। प्रमुख neurotransmitter हरुमा Dopamine, Serotonin, Dopamine, Acetylcholine, GABA, Glutamate, Norepinephrine, Endorphins आदि हुन्। यिनीहरूको संरचना कार्यक्षेत्रहरु जटिल छन् तैपनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने यिनीहरूको असन्तुलनले मानिसमा धेरै प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक असन्तुलनहरु आउँछन्।
प्रेम: आत्मिक अनुभूति या जटिल रासायनिक प्रतिकृया?
स्नायु बिज्ञान अनुसार प्रेम आकर्षण आदिको प्रक्रिया बुझ्न हामीले धेरै प्रेमिल मस्तिष्कको MRI गरेर हेर्यौ। त्यसमा मस्तिष्कको त्यो भाग बढी सक्रिय भएको पाइयो जसले डोपामाइन (Dopamine) भन्ने रसायनको उत्सर्जन गर्थ्यो जसलाई हामि आनन्ददायक न्युरोट्रान्समिटर (Neurotransmitter) भनेर चिन्छौ। प्रेमिल भावले पनि मस्तिष्कको त्यहि भागलाइ बढी सक्रिय गराएको पाईयो जुन भाग प्रेरणा (Stimuli) प्रतिक्रिया (Response) पुरस्कार (Reward) को चक्रले मानव ब्यबहारलाइ निर्देशित गर्छ।
त्यहि भागले मान्छेको ध्यान केन्द्रित गर्ने, आनन्दित पार्ने र पुरस्कारको ग्रहण गर्ने पनि गर्छ। जब मानिस यहि कथित प्रेमको चक्करमा पर्छ त्यो बेला मस्तिष्कको त्यहि भागले अन्य हर्मोनहरु विशेषगरि कोर्टिसोल (Cortisol) को उत्सर्जन गर्छ जसलाई हामि तनाव हार्मोन (Stress Hormone) भन्छौ जसले मानिसको श्वासप्रश्वास बढाउने, चिटचिट पसिना आउने, गाला रातो हुने, नशा एकोहोरो र डरको भावना पैदा गराउछ। जब कोर्टिसोलको मात्रा बढ्दै जान्छ यसले अर्को न्युरोट्रान्समिटर सिरोटोनिनको (Serotonin) मात्रा घटाईदिन्छ। सेरोटोनिन त्यो हार्मोन हो जसले मान्छेको मनोदशालाइ स्थिर र खुसि राख्छ, जसको असन्तुलनले मान्छे अवसाद अर्थात डिप्रेसनमा जान्छ। त्यसैले असन्तुलित सेरोटोनिनले व्यक्तिलाइ प्रेममा एकोहोराउन आक्रामक बनाउन र डिप्रेसनमा धकेल्दीन सक्छ।
प्रेमका अवस्थामा अक्सिटोसिन( Oxytocin ) जसलाई हामि प्रेम हार्मोन (Love Hormone) भन्छौ बढी यौनजन्य शारीरिक सम्पर्कको बेला बढी उत्सर्जित हुन्छ र भेसोप्रेसिन (vasopressin) जस्ता हर्मोनहरु पनि उत्सर्जित हुन्छन जुन गर्भावस्था र आमा र बच्चा बीचको समन्धलाइ प्रभावित गर्ने हार्मोनहरु हुन्। डोपामाइनको उत्सर्जनले मानिसमा कोकिन सेवन गर्दा जस्तैको उल्लासोन्माद ( Euphoria) गराउने भएकाले पुरस्कार चक्रमा मानिस प्रेमलाइ आत्मिक परमात्मिक अलौकिक सोच्न सक्छ। जे होस् यो प्रेम भन्ने चिज पूर्णतया शारीरिक अझ स्पष्ट भन्ने हो भने मानिसको यौनिक ब्यबहार सङ्ग नै जोडिएको छ।
प्रेरणा (Stimuli) प्रतिक्रिया (Response) पुरस्कार (Reward)
एकपल्ट कार्यक्रम दिशानिर्देशमा वरिष्ठ नृत्याङ्गना मिथिला शर्माले भनेकी थिइन् म नाच्दा नाच्दै यस्तो अवस्थामा पुग्छु जहाँ एकाएक शून्य हुन्छ। त्यसको जवाफमा विजय कुमारले पनि अन्तर्वार्ताको क्रममा उनी पनि एकाएक निशब्द हुन्छन् एक शून्य अर्थात् Void को अवस्थामा पुग्छन्। त्यो एक यस्तो उन्मादको (Euphoria) कै अवस्था हो जहाँ मनुष्यलाई एउटा छुट्टै अलौकिक जस्तो वर्णन नै गर्न नसकिने अनुभूति हुन्छ त्यसका कारक तत्वहरू तिनै neurotransmitter हरु हुन भन्न सकिन्छ।
योग र प्राणायामको कतिपय अवस्थामा आध्यात्मिक गुरुहरुले विचारशून्य मस्तिष्कको उल्लेख गरेका छन्। ती अलौकिक र आध्यात्मिक आत्मिक लाग्ने अनुभूतिहरुको पछाडि तिनै neurotransmitter हरुको खेल बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
मानिसहरू शारीरिक अभ्यास प्रति किन मोहित छन् त? यसको लागि हामी एउटा उदाहरण लिन सक्छौं। चिनियाँ मार्शल कला कुङ्ग फु (Kung Fu) को जननी मानिने Shaolin Temple मा रहेका भिक्षुहरूले आत्मरक्षाको लागि शुरू गरेको यो कलाको कठिन अभ्यासले उनीहरूको शारीरिक क्षमताको विकास त छँदै छ, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र स्थिरतामा इन्डोर्फिनको भुमिका हुन्छ। कडा शारीरिक श्रम पश्चात उनीहरूले ध्यानको अवस्था प्राप्त गर्दछन् जुन आत्मिक या परमात्मिक नभई Endorphin लगायतका शरीरमै बनेका आनन्ददायक न्यूरोट्रान्समिटरहरु प्रदत्त रासायनिक प्रतिक्रियाहरु हुन्।
प्रेरणा (Stimuli) प्रतिक्रिया (Response) पुरस्कार (Reward) यस्तो एउटा चक्र हो जुन मानव लगायत प्रत्येक जनावरको व्यवहार र क्रम विकास दुवैलाई निर्देशित गर्छ। हामीले जनावरलाई तालिम दिँदा यही चक्रको प्रयोग गर्छौं। जनावरको कुनै व्यवहारलाई हामीले सुदृढीकरण (Reinforcement) या निराकरण गर्न हामीले पुरस्कार चक्रको प्रयोग गर्छौं। कुनै व्यवहार देखाउँदा पुरस्कार दिने गर्नाले जनावरमा बिस्तारै त्यस व्यवहार सुदृढ हुँदै जान्छ भने नकारात्मक पुरस्कारले निश्चित व्यवहार निराकरण हुन्छ।
गाँजा जस्ता वनस्पतिमा केही त्यस्ता रसायन हुन्छन् जसले तिनै neurotransmitter हरुको जस्तै कार्य गर्न सक्छन्। जस्तो गाँजामा हुने THC ले स्नायु प्रणालीको त्यो क्षेत्रलाई उत्तेजित बनाउँछ जसले Dopamine काे उत्सर्जन गर्छ। मानिसको गाँजा तान्ने व्यवहार अब सुदृढ हुँदै जान्छ किनकी THC ले गर्दा शरीरले पुरस्कारको रुपमा शानदार neurotransmitter Dopamine प्राप्त गरेको छ जसले मानिसलाई आनन्दको अनुभूति गराउँछ।
त्यस्तै गाउँदा, गहन अध्ययन गर्दा, कडा शारीरिक अभ्यास गर्दा चाहे त्यो नृत्य होस्, या मार्शल कलाको अभ्यास या योग होस् या प्राणायाम या अन्य कुनै शारीरिक कार्य गर्दा होस्, यिनै neurotransmitter हरु उत्सर्जित हुन्छन्। त्यो पुरस्कारको लागि ती व्यवहार तथा कार्यहरू बिस्तारै सुदृढ हुँदै जान्छन्। यो एक दुई व्यक्तिमा मात्र नभई मनुष्य लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूको क्रम विकासको प्रत्येक चरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।
हाम्रो शरीरमा रहेका स्नायु तन्त्रीकाहरु र हर्मोनहरु उत्सर्जित गर्ने ग्रन्थि अनि दुवैलाई एक व्यवस्थित स्वरुपमा सञ्चालन गर्ने मानव मस्तिष्कको कार्य धेरै जटिल छ। हाम्रा संवेदनाहरु, अनुभूतिहरु जो हामी अलौकिक आत्मिक भन्ने ठान्छौँ। यिनै जटिल रासायनिक यौगिकहरुका असन्तुलनले देखिने मानिसका अचम्मका र असन्तुलित व्यवहारहरु पनि हामीले अलौकिक, पराप्राकृतिक र असाधारण मानेर भ्रमित पनि हुन्छौँ। यसैको आधारमा धेरै व्यक्तिहरू, आध्यात्मिक गुरुहरू र अलौकिक शक्ति सम्पन्न भएको दावी गर्ने हरुको भ्रमजालमा हामी फस्न पुग्छौँ। बोक्सि, भूत, प्रेत लागेको देखि माता देवता चढेको जस्ता हास्यास्पद कुराहरूको चक्करमा हामी पर्छौँ।
आफ्नै शरीरले उत्सर्जन गर्न सक्ने neurotransmitter हरुको लागि अफिम, कोकिन, गाँजा आदि लागू औषधको दुर्व्यसनमा फसेँर धेरैले आफ्नो जिन्दगी सखाप पारेका छन् भने डिप्रेसन र इञ्जाइटीको कारणले कति मानिसहरू आफ्नो जीवन बाँच्न संघर्ष गरिरहेका छन्। हाम्रो शरीरमा भएका हर्मोनहरुको असन्तुलनले गर्दा उत्पन्न यस्ता परिस्थितिहरूलाइ बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ।
अझ चर्को समस्या त यस्तै हर्मोनका कारणले अनुभूति भएका उन्माद, नाद र प्रेम भक्तिका आधारमा चर्चका पादरीहरु, कृष्णभक्त बाबाहरु, मौलानाहरुले निर्दोष व्यक्तिहरुको यौनशोषण समेत गरेका छन्। कति महिला पुरुषहरु यसैको घनचक्करमा परेर बर्बाद भएका छन्। यो सबै आफ्नै शरीरका विभिन्न प्रकृयाहरु चिन्न नसकेर यिनै प्रक्रियालाइ माहान आत्मिक परमात्मिक भनेर भजाउँदा आज धेरै व्यक्तिहरू शोषणको जालमा परेका छन्।
आफ्नो शरीरलाई सक्रिय राखौ। त्यसको लागि नृत्य गर्नुहोस् या खेल खेल्नुहोस् या मार्शल कलाको अभ्यास गर्नुहोस् या योग प्राणायाम गर्नुस् या पढ्नुहोस् या बाजा बजाउनुहोस् या चित्र बनाउनुहोस्। जसरी पनि यी neurotransmitter हरुको उत्सर्जन शरीरमा भइरखोस् अनि पुरस्कार उत्प्रेरणा र प्रतिक्रियाको प्राकृतिक चक्र चलिरहोस्। आनन्दित हुनुहोस, अल्हादित र मस्त रहनुहोस्। त्यो तपाईंको आफ्नै शरीरमा छ।
तारा: एक वास्तविक रचनाकार!
deepszeroJuly 26, 2021Astronomy, Element Creation, Star, Stardust No comments
एक औँशीको निष्पट्ट अन्धकारको रातमा एकान्त स्थान जहाँ शहरिया बत्तीको झिलीमिलीको प्रकाश प्रदूषण हुँदैन त्यहाँ बसेर आकाश नीहार्नुको आनन्द नै अनुपम हुन्छ। सुदुर आकाशमा झिलमिलाई रहेका ती साना प्रकाशबिन्दुहरु सुन्दर मात्र छैनन् तिनीहरूको हामीसँग धेरै गहन तथा जटिल समन्ध छ। ती प्रकाशविन्दुहरु तारा (Star) हरु हुन्।
एक महान अन्तरिक्ष विज्ञानी कार्ल सागन (Carl Sagan) ले १९८० मा १३ भागको एक टिभि श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेका थिए। शायद आज सम्म त्यतिको उत्कृष्ट र गहन प्रस्तुति आएकै छैन। कार्ल सागन र उनको त्यो Cosmos भन्ने टिभि श्रृङ्खलाले विश्वको सामुन्ने अन्तरिक्ष विज्ञानको गहन तथा जटिल विषयलाई सबै बुझ्ने गरी सबैको सामुन्ने पस्किएको थियो। त्यही प्रस्तुतिमा सागनले भनेका थिए, " हाम्रो DNA 🧬 मा रहेको नाइट्रोजन, दाँतमा रहेको क्याल्सियम, रगतमा रहेको फलाम, हाम्रो स्याउको केकमा रहेको कार्बन सबै मर्दै गरेको ताराको भित्र बनेको हो। हामी सबै ताराको धुलोहरु हौँ।"
झट्ट सुन्दा अनौँठो र रोमाञ्चकारी लाग्छ तर यो सत्य हो कि हामी मात्र होइन हाम्रो वरिपरि रहेका प्राणी तथा वनस्पतिहरू र श्वासप्रश्वासमा प्रयुक्त अक्सिजन तथा कार्बन डाई अक्साइड , ती ढुङ्गाहरु, त्यो उज्वल हिरा, आणविक भट्टीमा तातिरहेको युरेनियम होस् या त्यो किसानको काँधमा झुण्डिएको कोदालो या ती महिलाको कानमा झल्किएको सुनको गहना..........यो ब्रम्हाण्डमा हामीले देखेका, भोगेका सबै वस्तुहरू जुन तत्वहरूले बनेका छन् ती सबै तत्वहरू आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्दै गरेका तिनै झिल्मिलाई रहेका ताराहरुले गरेका हुन्।
"हामीले सुन्दै आएका थियौँ, एउटा चिज हुन्छ "पारसमणि (Philosopher's Stone)" जसले मा छुवायो भने फलाम सुनमा परिणत हुन्छ। "अल्केमी तन्त्र" भन्ने पुस्तकमा पनि फलामलाई कसरी सुनमा बदल्ने भनेर धेरै जडी बुटीको उल्लेख गरेको पढेँ। कतिपय भारतीय आध्यात्मिक गुरुहरुले विभिन्न पुस्तकमा त्यस्ता दावी पढ्न सकिन्छ। एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु नारायण दत्त श्रीमालीले आफैले प्रयोग गरेको भनेर पनि प्रवचन पनि दिएका छन्। उनले पारो (Mercury) लाइ विभिन्न चरणमा प्रशोधन गरेर पारसमणि बनाउन सकिन्छ जसले फलामलाई तत्काल सुनमा परिणत गर्न सक्छ जुन आफैले प्रयोग गरेको भनेर पनि दावी सहित भनेर लेखेका छन्।
फलाम सबै भन्दा स्थिर नाभी भएको तत्व हो अर्थात् फलामलाई नाभिकीय संयोजन (Nuclear Fusion) गर्नको लागि विशाल शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। सूर्यले समेत फलामको नाभिलाई संयोजन गरेर अर्को तत्व बनाउन सक्दैन। यसको लागि सूर्य भन्दा २५ औँ गुणा ठूला विशाल ताराहरूको जीवनको अन्त्यमा गर्ने महाविष्फोट को आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले ती गुरुहरुले झुटो दावी गरिरहेछन् भन्ने कुरा Physical Chemistry पढ्नासाथ मैले बुझी हालेँ।
जब मैले Physical Chemistry पढ्न थालेँ त्यतिबेला मलाई रासायनिक प्रतिक्रिया (Chemical Reaction) र नाभिकीय प्रतिक्रिया (Nuclear Reaction) को बारेमा बुँझे। एउटा तत्वबाट अर्को तत्वमा बदलिने प्रक्रिया ती गुरुहरुले भने जस्तो सहज हुँदो रहेनछ भन्ने थाहा भयो। चाहे नाभी विखण्डन (Nuclear Fission) होस् नाभी संयोजन (Nuclear Fusion) हुँदा विशाल शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो अणुबम विष्फोट देखि सूर्यको शक्ति उत्पादन प्रक्रियामा बुझी सक्यौँ। श्रीमाली र उनका शिष्यलाई रासायनिक प्रतिक्रिया र नाभिकीय प्रतिक्रियाको बीचमा फरक नै थाहा रहेनछ नत्र एउटा घोलमा फलाम हालेर सुन सुन्छ भनेर लेख्ने बोल्ने गर्दैनथिए होलान्। "
हाम्रो ब्रम्हाण्डमा जति पनि वस्तुहरू छन् तिनीहरूको रचना विभिन्न तत्वहरूको रासायनिक यौगिक (Chemical Compounds) हरु, तत्वहरूको मिश्रण (Mixtures)हरुबाट निर्मित छन्। तत्वहरू यस्तो पदार्थ हो जसका परमाणुहरुलाई कुनै पनि रासायनिक प्रक्रियाबाट टुक्राउन सकिँदैन। परमाणुका नाभीकेन्द्रमा (Atomic Nuclei) निश्चित सङ्ख्यामा प्रोटोन (Proton) रहन्छन्। त्यही प्रोटोनको सङ्ख्याले नै अनुसार तत्वहरू पनि अलग अलग हुन्छन्। एउटा प्रोटोन नाभिकेन्द्रमा भएको तत्व हाइड्रोजन (Hydrogen: H) हो भने ६ वटा भएको कार्बन (Carbon: C), ८ वटा भएको अक्सिजन (Oxygen: O) भने २६ प्रोटोन भएको फलाम (Iron: Fe) ७९ वटा भए सुन (Gold: Au) र ९४ भए प्लुटोनियम (Plutonium: Pu)।
अहिले सम्म प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध भएका ९४ तत्व छन् (*केही अन्य तत्व पनि उपलब्ध छन् तर तिनीहरू अति सुक्ष्म मात्रामा उपलब्ध हुन्छन्) जसबाट यो पृथ्वीमा हामीले देखेका भोगेका प्रत्येक वस्तुहरूको रचना भएको छ। हाम्रो तथा अन्य प्राणी र वनस्पतिहरूको शरीरको देखि उनिहरुले खाने खाना सम्मका जैविक वस्तुहरूको निर्माणमा छ वटा तत्वहरू र तिनीहरूका यौगिकहरु प्रयुक्त हुन्छन् ती हुन् कार्बन, हाइड्रोजन (Hydrogen: H), नाइट्रोजन (Nitrogen: N) अक्सिजन (Oxygen:O), फस्फोरस (Phosphorus: P) र सल्फर (Sulfur: S) हुन्। यिनीहरूले जैविक वस्तुहरूको रचना लगभग ९९% भाग ओगट्छन।
प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध ती ९४ तत्वहरू के एकै साथ रचना भएका हुन् त? अध्ययन हरुले त्यस्तो देखाउँदैनन्। झण्डै १४ अर्व वर्ष पहिले कुनै अनन्त सघन बिन्दुबाट महाविष्फोट (Big Bang) बाट यो ब्रम्हाण्ड अस्तित्वमा आउँदा सबै तत्वहरू एकै पटक अस्तित्वमा आएका होइनन्। पहिलो १० सेकेण्ड देखि २० मिनेटको अवधिमा ब्रह्माण्डको सबै भन्दा सहज तत्व हाइड्रोजन साथै हेलियम (Helium: He) र केही मात्रामा लिथियम (Lithium: Li) र बेरीलियम (Beryllium: Be) का साथ तिनीहरूका केही Isotopes हरु अस्तित्वमा आएका हुनुपर्छ। त्यस प्रक्रियालाई Big Bang Nucleosynthesis(BBN) भनिन्छ। ब्रम्हाण्ड त्यस पश्चात ४ लाख वर्ष सम्म विकिरण र तिनै शुरुवाती पदार्थहरुको मिश्रणको रुपमा रह्यो।
त्यस पश्चात झण्डै १० करोड ८० लाख वर्षसम्म ब्रम्हाण्ड अन्धकार युगमा बस्यो जसलाई हामी Cosmic Dark Ages भन्छौ त्यसले हामीलाई सधैं चुनौती दिइरहेको छ किनकि त्यो बेलाका विकिरणहरु अवलोकनका लागि धेरै मन्द छन्। यो अवधि को अन्त्य त्यतिबेला भयो जब यो ब्रम्हाण्डमा पहिलो तारा (Star) को जन्म भयो। हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासहरु गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले एक बिन्दुमा जम्मा हुन्छन्। जब त्यो बिन्दुमा यी ग्यासको घनत्व बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसले त्यहाँ ताप र चाप दुवै बढ्दै जान्छ अनि हाइड्रोजनको अणुहरु एकआपसमा संयोजित (Fuse) हुन्छन् अनि हेलियम बन्छन्। त्यो प्रक्रियामा विशाल शक्ति उत्सर्जित हुन्छ।यो प्रक्रियालाई हामी नाभिकीय संयोजन (Nuclear Fusion) भन्छौ। अब त्यो विशाल डल्लोले ताप र प्रकाश उत्सर्जन गर्छ। यसरी ब्रम्हाण्डमा ताराहरूको जन्म भएको हो।
तारा: ब्रह्माण्डको उज्यालो देखि तत्वहरूको रचना
तारा प्रमुख रुपमा हाइड्रोजन र हेलियमको आफ्नै गुरुत्वले बाँधिएको तातो Plasma को डल्लो हो। हामीले सजिलोको लागि ग्यासको डल्लो भने पनि यो पदार्थको चौथो अवस्था अर्थात् Plasma को डल्लो हो। Plasma भनेको पदार्थको त्यस्तो अवस्था हो जसमा अणुहरुको बाहिरी कक्षमा रहेका Electrons इलेक्ट्रोन/इलेक्ट्रोनहरु स्वतन्त्र हुन्छ जसले गर्दा यो विद्युतीय सुचालक हुन्छ। ताराको केन्द्रमा हाइड्रोजन अणु र यसका Isotopes हरु एक आपसमा संयोजित (Nuclear Fusion) हुँदा विशाल ताप र प्रकाशको उत्सर्जन हुन्छ। त्यसैले ताराहरूको आफ्नै ताप र प्रकाशको स्रोत हुन्छ। सुर्य पनि मध्यम आकारको तारा हो।
सौर्य मण्डलका ग्रह देखि विभिन्न प्रकारका ताराहरूको तुलना
हामीले आकाशमा हेर्दा अनगिन्ती ताराहरु झिल्मिलाइरहेका देख्छौँ। यहाँ बाट धेरै टाढा भएकाले ती साना प्रकाश बिन्दु मात्र देखिएका छन् तर तिनीहरूको आकार धेरै विशाल हुन्छ। सुर्य एक मध्यम आकारको तारा हो। ताराहरूको जीवन त्यसको पिण्ड अर्थात् त्यस सङ्ग रहेको पदार्थको मात्रामा निर्भर गर्छ। जति धेरै पिण्ड उति धेरै नाभिकीय संयोजन र उति धेरै शक्ति उत्सर्जन र त्यति नै छिटो ताराको आयु हुन्छ। अर्थात् जति ठूलो तारा त्यति नै छोटो आयु।
तारामा दुई बलहरुको बीचमा सधैँ द्वन्द हुन्छ। एक ताराको आफ्नो गुरुत्वबलले तारालाई केन्द्रमा खुम्च्याउन खोज्छ भने नाभिकीय संयोजनबाट उत्पन्न शक्तिले तारालाई बाहिर तिर फैलाउन खोज्छ। तारामा रहेको इन्धन हाइड्रोजन र हेलियम नाभिकीय संयोजन हुँदै जाँदा ती अन्य तत्वमा परिवर्तित हुँदै जान्छन्। जस्तो हाइड्रोजन संयोजित हुँदा हेलियम, हेलियम संयोजित हुँदा कार्बन, कार्बन र हेलियम संयोजित हुँदा अक्सिजनको रचना हुँदै जान्छ।
यो प्रक्रियामा जति पिण्डको क्षय हुन्छ त्यो शक्तिको रुपमा उत्सर्जित हुन्छ जसलाई आइन्स्टाइनको प्रसिद्ध समिकरण E = MC² ले व्याख्या गर्छ। जसमा जुन नाभिकीय संयोजनको हुँदा जुन पिण्ड क्षय हुन्छ त्यो विशाल शक्तिको रुपमा उत्सर्जित हुन्छ। बिस्तारै ताराको केन्द्रमा नाभी संयोजन गर्न योग्य इन्धन हाइड्रोजन हेलियमहरु सकिँदै जान्छन् र फलाम जस्ता तत्वको मात्रा बढ्दै जान्छ। ताराले फलामलाई नाभिकीय संयोजनको प्रक्रियामा लैजान सक्दैन किनकि फलाम भन्दा गह्रौ तत्वहरू यति धनात्मक आवेश (positively charged) हुन्छन् कि उनीहरुलाई एकठाउँमा ल्याउन धेरै विशाल शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यस पछि तारा जीवनको अर्को चक्रमा प्रवेश गर्छ त्यसको प्रकार ताराको आकार, पिण्डमा भर पर्छ।
ताराको केन्द्रमा जब नाभी संयोजन (Nuclear Fusion) को योग्य इन्धन हाइड्रोजन हेलियम सकिँदै जान्छ तव गुरूत्वले तारालाई केन्द्र तिर खुम्चाउन थाल्छ किनकि बाहिर फैलाउने बल कमजोर हुन जान्छ। त्यति बेला ताराको पिण्डको परिमाणले ताराको मृत्युको प्रकारलाई निर्धारण गर्छ। कुनै Supuernova भएर विस्फोट हुन्छन्, भने कुनै आफ्नो आकारलाई बढाउँदै विशाल रातो तारा (Red Giant) हुन्छन् भने कुनै न्यूट्रोनले मात्र बनेको अति सघन तारामा परिणत हुन्छन् त कुनै कृष्ण बिवर (Black Hole) बन्छन्।
Evolution of Stars (ताराहरूको जीवन)
सुर्य कम्तीमा दश गुणा बढी पिण्ड भएका विशाल ताराहरुको हकमा जब केन्द्रमा हाइड्रोजन र हेलियमको अभावमा नाभिकीय संयोजन प्रक्रिया रोकिन्छ तव यसको विशाल गुरुत्व बलले तारालाई खुम्च्याउन थाल्छ तव त्यहाँ विशाल विस्फोट हुन्छ। त्यस विष्फोटलाइ Supernova भनिन्छ। यस प्रकारको बिष्फोटमा यति विशाल शक्ति उत्सर्जन हुन्छ कि पहिला संयोजन गर्न असम्भव भएका तत्वहरु संयोजित भएर अझै भारी तत्वहरूको सृजना हुन्छ। यो प्रक्रियामा एउटा संयोजन हुँदा उत्सर्जित शक्ति अर्को संयोजनको लागि कारक हुँदै एउटा श्रेणीबद्ध तवरले अघि बढ्छ। अक्सिजन(Oxygen:O), अल्मुनियम (Aluminum: Al) , सिलिकन (Silicone :Si), म्याग्नेसियम (Magnesium: Mg), सोडियम (Sodium: Na), क्याल्सियम (Calcium: Ca), फलाम (Iron : Fe) आदि तत्वहरूको रचना हुन्छ। यस प्रक्रियालाई हामी Supernova Nucleosynthesis भन्छौ।
Eta Carinae Supernova Explosion
१०५४ CE मा एउटा विशाल तारो आफ्नो इन्धनको समाप्ति सँगै विस्फोट भएको थियो जसलाई पृथ्वीबाट समेत कयौ दिनसम्म दिनको उज्यालोमा नै देख्न सकिन्थ्यो र चिनियाँहरूले त्यो विस्फोट (Supernova) लाई नयाँ ताराको रुपमा चित्रित गरेका थिए। एक्कासी आकाशमा नयाँ निकै चहकिलो तारा देखा परे पछि चिनियाँ तथा जापानीहरुले त्यसलाई पाहुना ताराको रुपमा उल्लेख गरेका छन्। अहिले त्यसलाई हामी Crab Nebula को रुपमा चिन्छौ जुन ६५०० प्रकाशबर्षको दुरीमा वृष तारामण्डलमा पर्छ।
गङ्गटो निहारिका (crab nebula) १०५४ CEमा देखिएको थियो जुन जापानी तथा चिनियाँहरूले पाहुना तारा (Guest Star भनेर उल्लेख गरेका छन्
न्यूट्रोन तारा (Neutron Star)
सूर्यको पिण्ड भन्दा दश देखि पच्चीस गुणा बढी पिण्ड भएका ताराहरुको केन्द्रमा जब त्यही प्रक्रिया हुन्छ अर्थात् हाइड्रोजन हेलियमको अभावमा नाभी संयोजन प्रक्रिया रोकिन्छ तव ताराको केन्द्रको गुरुत्वले तारालाइ खुम्च्याउदै लैजान्छ र बिशाल बिस्फोटन Supernova हुन्छ। त्यस पछी त्यो तारा खुम्चिदै गएर मात्र १० किमी ब्यास भएको लगभग पुरै न्युट्रोन (Neutron: जो अणुको केन्द्रमा भएको बिद्युत आवेश बिहिन कण) ले मात्र बन्छ।
यो तारा यति सघन हुन्छ कि चिनीको दाना जति न्युट्रोन ताराको पदार्थको तौल १० करोड टन हुन्छ। १० किमी ब्यास भएको न्युट्रोन तारा सुर्य भन्दा २ ३ गुणा बढी पिण्ड भएको हुन्छ। त्यहि आकारको ताराको चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वीको भन्दा २ खर्ब बढी शक्तिशालि हुन्छ र यो आफ्नै अक्षमा प्रति मिनेट ४३००० पटक घुम्छ। त्यस्तो तारा घुम्दा यसको दुई ध्रुव बाट उच्च शक्ति बोकेका Gamma प्रकाशका किरणहरू निस्कन्छन्। यसलाई हामी Pulsar भन्छौ।
पल्सर (Pulsar) :तिब्र गतिमा घुमिरहेको न्यूट्रोन तारा
त्यस्ता सघन ताराहरु जव एक आपसमा परिक्रमा गर्दै ठोक्किएर आपसमा समाहित हुन्छन् त्यो बेला उत्सर्जित हुने विशाल ऊर्जा तथा अति शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्रले अझै भारी तत्वहरुको नाभी संयोजन गरेर झन् भारी तत्वहरूको सृजना हुन्छ जुन सामान्य Supernova बिष्फोटले रचना गर्न सकेको थिएन।
२०१६ मा १३ करोड प्रकाश वर्ष को दुरीमा आकाशगङ्गा Galaxy NGC 4993 जुन Hydra Constellation अन्तर्गत पर्छ त्यहाँ यही घटना घटेको थियो। त्यस बाट उत्पन्न उच्चशक्ति विकिरण र बिष्फोटनलाइ NASA Fermi Gamma-ray Space Telescope को सहायताले अवलोकन गरिएको थियो भने त्यसबाट बिस्तारित गुरुत्व तरङ्गलाइ (Gravitational Wave) The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO बाट महसुस गरेका थियौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको गुरुत्व तरङ्गको सिद्धान्त जसमा उनले एक शताब्दी अघि गुरुत्व पनि तरङ्गको रुपमा अन्तरिक्षमा यात्रा गर्छ भनेर परिकल्पना गरेका थियो त्यो प्रमाणित भएको थियो।
ती दुई न्यूट्रोन ताराहरु एक आपसमा समाहित हुँदा विशाल मात्रामा सुन (Gold: Au) काे रचना भएको त्यो बेलाको अध्ययनहरुले देखाएका थिए। यसरी न्यूट्रोन ताराहरु एक आपसमा समाहित हुँदा भारी तत्वहरू जस्तो चाँदी (Silver: Ag), प्लाटिनम (Platinum: Pt), लेड (Lead: Pb), पारो, (Mercury: Hg) देखि युरेनियम (Uranium: U), प्लुटोनियम (Plutonium: Pu) जस्ता धेरै भारी तत्वहरूको सृजना हुन्छ।
सेतो फुच्चे तारा ( White Dwarf)
हाम्रो सूर्य जस्ता ताराहरुको केन्द्रमा जब नाभी संयोजनको लागि चाहिने हाइड्रोजन र हिलीयमको इन्धन सकिन्छ तव ठूला ताराहरु जस्तो यो Supernova बिष्फोट हुने या न्यूट्रोन तारा बन्ने या कृष्ण विबर (Black Hole) हुने गर्न सक्दैन। हाम्रो Milkyway आकाशगंगा (Galaxy) मा झण्डै ९७ % ताराहरू यस्तै हुन्। जब यिनीहरूले आफ्नो हाइड्रोजन हिलियमको परिमाणलाइ नाभी संयोजन गर्दै कार्बन र अक्सिजनमा रूपान्तरण गर्छन् तव यो तारा फैलिएर विशाल रातो तारामा परिणत हुन्छ।
यसको बाहिरी आवरणमा ताराको गुरुत्वशक्ति कमजोर हुँदा त्यो स्वतन्त्र भएर फुस्किन्छ र एक ग्यास र धूलोको बादल मात्र रहन्छ त्यसलाई (Planetary Nebula) भनिन्छ।तर केन्द्रमा एकदम तीव्रगतिमा हेलियम नाभि संयोजन हुँदै धमाधम कार्बनमा परिणत हुन्छ जसलाई Tripple Alfa Process भनिन्छ। बाँकी रहेको सानो तर सघन केन्द्रमा कार्बन र अक्सिजन मात्र रहन्छन् जसबाट लामो समयसम्म सेतो प्रकाश निस्कन्छ त्यसलाई White Dwarf तारा भनिन्छ। हाम्रो सूर्य पनि करिब6अर्ब वर्ष पछि त्यस्तै Red Giant तारा जसको फैलावट बृहस्पति सम्म पुग्छ खुम्चिएर पृथ्वी जत्रै भएर White Dwarf Star मा परिणत हुनेछ।
Cat's eye Planetary Nebula: बीचमा white dwarf तारा
यिनै White Dwarf Star ले हाम्रो साथी ताराबाट पदार्थहरू लिन पायो भने यो पनि अस्थिर हुन्छ र आणविक बम जस्तै बिष्फोट हुन्छ त्यसमा पनि केही तत्वहरू सृजित हुन्छन् जस्तो लिथियम (Lithium) म्याङ्गानिज (Manganese: Mn), तामा (Copper: Cu) आदि। White Dwarf ताराको जीवनको समन्धमा धेरै परिकल्पनाहरु छन्।जस्तो कि उच्च चाप र कार्बनको उपलब्धताले यो हिराको ग्रहमा(Diamond Planet) परिवर्तित हुन पनि सक्छ। हीरा शुद्ध कार्बनको विशेष संरचना हो।
पृथ्वीबाट सबै भन्दा बढी चहकिलो देखिने तारा Sirius हो त्यो दोहोरो तारा प्रणाली (Binary Star System) हो यसको साथी तारा Sirius B एउटा White Dwarf Star हो। जुन ८ प्रकाश वर्षको दुरीमा छ। रातो विशाल ताराहरुमा बृष तारामण्डल (Taurus Constellation)को Aldebaran, शिकारी तारामण्डल (Orion Constellation) काे Betelgeuse आदि छन्।
Red Giant Star roasting Jupiter like Planet
यसरी Big Bang बाट सृजित हाइड्रोजन र हिलीयम तत्वहरू विभिन्न किसिमका ताराहरुमा रूपान्तरित हुँदै आखिर ताराहरुले आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्दा अझ भारी तत्वहरूको सृजना हुँदै जान्छन्। त्यही Big Bang बाट निर्मित हाइड्रोजन हेलियम देखि ताराहरूको नाभी संयोजन प्रक्रिया बाट निर्मित कार्बन अक्सिजनहरु, सेता फुच्चे ताराहरूको बिष्फोटमा निर्मित फलाम, तामा म्याङ्गानिज, विशाल ताराहरूले सुपरनोभा विष्फोटको क्रममा उत्पन्न सोडियम, क्याल्सियम, अल्मुनीयम आदि र न्यूट्रोन ताराहरूको एक आपसमा मिल्दा उत्पन्न सुन, चाँदी, प्लाटिनम देखि यूरेनियम र प्लुटोनियमहरुले हाम्रो शरीर देखि पृथ्वी तथा सौर्यमण्डलको प्रत्येक वस्तुको निर्माण भएको छ।
Periodic Table: कुन तत्व कसरी सृजित भयो
यहाँ अवस्थित सबै जीवित तथा निर्जीव वस्तुहरू मात्र नभई हामीले देख्ने आँखा देखि हामीले सोच्ने मस्तिष्कका कोषहरू पनि तिनै तत्वहरुबाट बनेका छन्। त्यसैले आकाशलाई नीहार्दा झिलिमिली गरिरहेका ती साना प्रकाशबिन्दुहरुले आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्दा हाम्रो संसार बनेको हो। त्यसैले हामी तिनै ताराहरूका अंश हौँ। We all are stardust
ज्योतिष: अन्तरिक्ष विज्ञानको कसीमा
deepszeroJuly 21, 2021Astrology, Astronomy, Fraud, Pseudoscience, Science No comments
ज्योतिष! चाहे पूर्वीय होस् या पश्चिमा या कुनै पनि क्षेत्रको होस्, यसको विश्लेषण गर्दा विभिन्न आकाशीय पिण्डहरूको गति र अवस्थिति सङ्ग मानव जीवनका र पृथ्वीमा घटित विभिन्न घटनाक्रमको समन्धलाई केलाइन्छ। अर्थात् ती आकाशीय पिण्डहरूको अवस्थिति र गतिले (कारण) नै मानिसका जीवनका र पृथ्वीका प्रत्येक घटनाको (परिणाम) निर्धारण गर्छ भन्ने फलित ज्योतिषीय धारणा छ।
ज्योतिषका दुई भाग मध्ये एक गणित ज्योतिष हो जसले ग्रहहरूको अवस्थिति र चालहरुको गणना गर्छ भने अर्को फलित ज्योतिषले ती अवस्थिति र चालले मानिसको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै भविष्यवाणी समेत गर्छ। यहाँ हामीले विश्लेषण गर्न खोजेको यही फलित ज्योतिष हो। यही कारण र परिणामको समन्धले (Causality) गर्दा यसलाई विज्ञान जस्तो लाग्न सक्छ। के यो विज्ञान नै हो त? हामी यही प्रश्नको विश्लेषण यहाँ गर्दैछौँ।
मनोवैज्ञानिक B F Skinner ले एउटा प्रयोग गरेका थिए। सो प्रयोगमा एउटा बन्द बाकसमा भोका परेवाहरू राख्थे। बेला बेलामा त्यो बाकसमा खाना हालिदिन्थे। अलिक समय पछि परेवाहरुमा अनौँठो तर निश्चित तथा लगातारको व्यवहार देखिन थाल्यो। एउटा एकै ठाउँमा फनफनी घुम्थ्यो, एउटा घडीको उल्टो दिशा तर्फ वृत्ताकार घुम्थ्यो। ७५% परिवारहरूले त्यस्तै अनौँठो व्यवहार लगातार देखाइरहन्थे। यहाँ परेवाहरु अब अन्धविश्वासी भइसकेका थिए। परेवाहरु बन्द बाकसमा भएकाले Skinner ले उनीहरूको व्यवहार देख्न सक्दैनथे। उनीहरूले जे सुकै गरे पनि खाना लगातार दिई नै रहेका थिए। परेवाहरु चाहिँ निश्चित व्यवहार देखाउँदा खाना आउने रैछ भन्ने अन्धविश्वासमा परिसकेका थिए। जसरी परेवा अन्धविश्वासी भए मानिसहरू पनि त्यसरी नै अन्धविश्वासी हुन्छन्।
बिज्ञान के हो?
बिज्ञान वास्तवमा कुनै निश्चित शास्त्र भन्दा पनि एउटा व्यवस्थित विधिशास्त्र हो जसले कुनै पनि प्राकृतिक परिघटनाहरु र त्यसका कारक तत्वहरूको बीचमा रहेको समन्धकाे तथ्यगत विश्लेषण गर्छ। बिज्ञानको आधारभूत (Fundamental) तथा संरचनागत (Structural) नियम भनेकै कुनै पनि घटना प्रक्रियागत रुपमा घटित हुन्छ, हरेक परिणामका कारणहरु हुन्छन र त्यो परिणाम पनि अर्को नया परिणामको लागि कारण हुन्छ।
यसरी प्रत्येक प्राकृतिक घटनाक्रमका प्रक्रियाहरु सञ्चालन हुन्छन। परिणाम र कारकहरु बिचको कार्यपरक (Functional relationship) समन्धहरुको अध्ययन अनुसन्धान नै भौतिक विज्ञान मात्र नभई सम्पूर्ण बिज्ञानको क्षेत्र हो। अब बिज्ञानले कुनै पनि प्रक्रिया बिना या कारण बिना घटनाक्रमको उपस्थितिलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छ। ति कार्यपरक समन्धहरुलाई पटक पटक बिभिन्न परिस्थितिमा परिकल्पना (Null hypothesis) र त्यसैको बैकल्पिक परिकल्पना (Alternative hypothesis) तथा सिमा सहित परिक्षण गरिन्छ।
यदि अनेकन पटक गरिएका परिक्षणले प्रत्येक पटक एकै किसिमको परिणाम दिन्छ भने सोही कार्यात्मक समन्धलाई कहिलेकाही निश्चित सिमा तोकेर नियमको (Scientific law) रूप दिन्छौ। यदि बहुसंख्यक परिणामहरु जुन परिकल्पना संग मेल खान्छन त्यही परिकल्पनालाइ त्यसको सही साबित हुने मात्रा या संभाव्यता (Probability) र सिमा सहित त्यसलाई सामान्यतया सिद्धान्तको (Scientific theory) स्वरुप दिइन्छ।
चाहे नियम नै किन नहुन र सिद्धान्त परिमार्जनका हरेक ढोका पुनः अनुसन्धान र अन्वेषणले कुनै पनि बेला खोल्न सकिन्छ। जुन घटनाक्रमको अनुसन्धान या ब्याख्यामा बैकल्पिक परिकल्पनाको कुनै सम्भावना छैन भने त्यस्तो परिकल्पनाको अनुसन्धानको कुनै औचित्य छैन र त्यो बैज्ञानिक प्रक्रिया हुनै सक्दैनन।
बिज्ञान हुनको लागि तथ्य र कारणहरुको समन्ध पहिल्याउन सक्नु पर्छ र तथ्य-कारणहरुको समन्ध अविरोधी र संगत पनि हुनुपर्छ। यसमा आदर्श विश्लेषण (normative analysis) र भ्यालु जजमेन्टको (value judgement) अनुपात कम से कम हुनुपर्छ। अब ज्योतिषका आधारभूत तथा अभिन्न अङ्गको संरचनाहरुको बारेमा चर्चा गरौ।
तारा तथा ग्रहहरू
ताराहरु विशाल आकारका हाइड्रोजन ग्यासका डल्लाहरु हुन्। उनीहरूको विशाल पिण्डको कारणले उत्पन्न चापको कारण हाइड्रोजन अणुहरु एक आपसमा संयोजित हुन् र हेलियममा परिणत हुन्छन् त्यस प्रक्रियालाई हामी नाभिकीय संयोजन (nuclear fusion) भन्छौ। त्यही अणु संयोजनको प्रक्रियाबाट विशाल मात्रामा शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले उनीहरुको स्व:उत्सर्जित ताप तथा प्रकाश हुन्छ। सुर्य एक मध्यम आकारको तारा हो।
त्यस्तै ग्रहहरू विभिन्न धातुहरू ढुङ्गा माटोले बनेका त्यस्तै पिण्डहरू हुन्। पृथ्वी (Earth), बुध (Mercury), शुक्र (Venus), मङ्गल (Mars) आदि त्यस्तै ग्रहहरू हुन् भने ग्यासले बनेका केही ग्रहहरू (Gas Giants) पनि हुन्छन् जस्तो बृहस्पति (Jupiter), शनि (Saturn), अरुण (Uranus), वरुण (Neptune) आदि चाहिँ सूर्य जस्तै ग्यासले बनेका हुन् तर उनीहरूमा नाभिकीय संयोजनबाट शक्ति उत्पन्न गर्न सक्ने मात्राको पिण्ड हुँदैन।
त्यसैले ग्रहहरूको आफ्नो प्रकाश त ताप हुँदैन। तर केही ग्रहहरू आफ्नो भौगर्भिक क्रियाकलापबाट (Geological Activities) ताप उत्पन्न भने गर्न सक्छन् जस्तो पृथ्वी। हाम्रो चन्द्रमा पनि त्यस्तै ढुङ्गा माटोले बनेको पृथ्वीको झण्डै एक तिहाई आकारको उपग्रह हो।
राशी के हो?
हामीले आकाश तिर हेर्दा चम्किरहेका ताराहरुलाई हेरेर अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर बिभिन्न आकारको कल्पना गरेर समुह बनाइएका छन जसरी हामीले बादल हेर्दै बिभिन्न आकारको कल्पना गर्दछौ। त्यस्तै ताराहरुका काल्पनिक आकारहरुलाई हामी तारामन्डल constellation भन्छौ। ती तारामण्डलहरुका सदस्यहरू ताराहरु मात्र नभई आकाशगङ्गा (Galaxies), निहारिकाहरू (Nebula) हरु पनि पर्दछन्।
त्यस्तै ती काल्पनिक आकारहरु ब्यक्ती पिच्छे फरक हुन सक्छन तर एकरुपता होस भन्ने ध्येयले हामीले केही विश्वप्यापी आकारहरु दिएका छौ जस्तो शिकारी तारामन्डल Orion, भालु तारामन्डल Ursa Major, सिँह तारामन्डल Leo आदी आदी।
यसरी सम्पूर्ण आकाशलाई हामीले ८८ वटा बिभिन्न आकार दिएका छौ ति मध्ये १३ वटा तारामण्डल या आकारहरु चाँही पृथ्वी आफ्नो अक्षमा पश्चिमबाट पुर्व तिर घुम्दा सुर्य पुर्वबाट उदाउदै पश्चिम तिर जुन बाटो Ecliptic भएर अस्ताउछ त्यही बाटोमा पर्दछन ति मध्ये १२ बटालाई हामीले राशी Zodiac Constellation भन्दछौ। जस्तो Capricorn, Leo, Scorpio इत्यादि।
राशि तारामण्डल (Zodiac Constellation)
विक्रम सम्वतका प्रत्येक महिना तिनै १२ बटा आकारहरुमा सूर्यको अवस्थितिमा भर पर्छ। सूर्य जुन तारामण्डलमा देखिन्छ त्यही अनुसार हामी महिना निर्धारण हुन्छ। सुर्य मेष तारामण्डलमा छ भने त्यो वैशाख महिना हो भने मिन तारामण्डलमा रहेमा चैत्र। जस्तो वैशाख सक्रान्तीलाई मेष सक्रान्ती पनि भनिन्छ जुन दिन सुर्य उदाउदा मिन तारामण्डल बाट मेष तारामण्डलमा सँक्रमण या गएको दिन हो त्यसैले त्यो बेलालाइ हामी सक्रान्ति भन्छौँ अर्थात् सूर्यले गरेको संक्रमण। यो १ गते नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर प्राय: यो १ गते नै पर्छ किनकि पृथ्वीको सूर्य परिक्रमाको कक्षिय गति, आफ्नो अक्षिय गति र ती तारामण्डलहरुको सापेक्षित स्थिरताले गर्दा त्यस्तो हुन्छ।
एकै समुहका ताराहरु पनि एक आपसमा धेरै टाढा हुन सक्छन। एउटै तारामण्डलका ताराहरु मध्ये कसैको आपसी दूरी त तिनीहरूको पृथ्वीसँगको दूरी भन्दा पनि टाढा छ। जस्तो मेष तारामण्डल जुन राशि पनि हो। त्यसको एउटा सदस्य तारा Beta Arietis (Sheratan) जम्मा ५९ प्रकासबर्ष टाढा छ भने अर्को सदस्य त आकाशगंगा NGC 772 छ जो १३० मिलियन प्रकाश वर्ष टाढा छ। त्यसैले Apparent (देखिने) र Absolute (वास्तविक) दूरी छुट्याउन धेरै व्यवस्थित विधि चाहिन्छन्।
कति राशिहरुमा हामीले तारा जस्तो देखेर झुक्किने वस्तु धेरै टाढाको वस्तु हाम्रो आकाशगङ्गा Milkyway भन्दा हजारौँ गुणा ठूलो आकाशगंगा पनि हुन सक्छ। किनकि Apparent Magnitude मा सानो देखिए पनि Absolute Magnitude त्यो विशाल हुन्छ। जस्तो सूर्य र चन्द्रमा आकाशमा उत्रै देखिन्छन् तर चन्द्रमा सूर्यको अगाडि नगन्य आकारको आकाशीय पिण्ड हो अर्थात् सूर्य ४०० गुणा ठूलो छ। तिनीहरू एकै स्थानमा देखिए भन्दैमा हामीले एउटै समुहमा राखेर त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु कदापि वैज्ञानिक हुन सक्दैन।
कहिलेकाहीँ धेरै टाढाबाट आएको प्रकाशको बाटोमा विशाल पिण्ड भएको वस्तुहरू जस्तो विशाल तारा, कृष्ण विवर (Black hole) रहेछन् भने त्यहाँको स्पेस बाङ्गिएको हुन्छ त्यसैले प्रकाश पनि त्यस्तै हुन्छ जसले गर्दा त्यो तारा ठूलो देखिन सक्छ, अर्कै स्थानमा देखिन सक्छ, एउटै वस्तु धेरैवटा देखिन सक्छ। जुन प्रक्रियालाई हामी Gravitational Lensing भन्छौ। जुन सापेक्षता सिद्धान्तको वास्तविक प्रमाण हो। त्यसैले जे देखिन्छ त्यो वास्तविकताबाट धेरै पर हुन सक्छ।
Gravitational Lensing को कारणले एउटै तारा भिन्न भिन्न स्थानमा, भिन्न आकारमा देखिन्छ
कोइ ताराहरुले आफ्नो जीवनको अन्त्य पनि गरिसकेका हुन सक्छन तर धेरै टाढा भएकाले र प्रकाशको गती पनि सिमित भएको कारणले गर्दा अझै ति अस्तित्वमा देखीइरहेका हुन्छन किनकी हामीसम्म आइरहेका प्रकाशका किरणहरु ताराहरु अस्तित्वमा हुँदैमा निस्केर पृथ्वी तर्फ आएका हुन्छन। जस्तो सुर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न ८ मिनेट लाग्छ अहिले हामीले देखेको सुर्य ८ मिनेट पुरानो हो र सुर्य क्षितिजमा हराएको या अस्ताएको ८ मिनेट पछी मात्र हामीले सो घटना देख्छौ।
हाम्रो आकाशगंगाको केन्द्रमा रहेको कुनै तारा बाट उत्सर्जित प्रकाश हामी सम्म आइपुग्न झण्डै २५००० वर्ष लाग्छ। अहिले हामीले देखेको ती ताराहरूको प्रकाश पृथ्वी तिर यात्रा गर्न शुरू गर्दा हामी बल्ल माटोको भाँडा बनाउन सिक्दै थियौँ। अन्तरिक्षमा सबै भन्दा तिब्र गतिमा सञ्चार हुने प्रकाशले बोकेर ल्याउने असर पनि यहाँ आइपुग्न २५००० वर्ष नै लाग्छ।
त्यसैले ती राशि भनिएका तारामण्डलका कतिपय ताराहरु महाबिष्फोट (Supernova) भइसकेका पनि हुनसक्छन् तर तिनीहरूको प्रकाश ताराको रुपमा हामीले देखिरहेका छौ किनकि उनीहरू तारा हुँदा उत्सर्जित प्रकाश बल्ल यहाँ आइपुगेको छ। त्यसैले यसको ज्योतिषीय गणनाले यहाँ पृथ्वीमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन।
Supernova and Nebula (सुपरनोभा तथा निहारिका)
ज्योतिषको अहिले सम्म प्राप्त सुचनाहरुले किन ति १२ बटा मात्र तारामन्डलको मानिसको जीवनमा महत्व छ किन अन्य तारामन्डलहरुको छैन जुन आकारहरु पूर्णतया काल्पनिक हुन त्यस्को जानकारी दिदैनन।
जबकि हिउँदको रातको शानदार तारामण्डल Orion उज्वल तारा Betelgeuse सूर्य भन्दा ९५० गुणा ठूलो र ६४२ प्रकाशवर्षकाे दूरीमा छ भने उत्रै उत्रै तारा वृश्चिक राशिको तारा Anteres सूर्य भन्दा ७०० गुणा ठूलो ५५४.५ प्रकाशवर्ष टाढा छ। तर Betelgeuse कुनै पनि राशिमा पर्दैन न Orion जस्तो विशाल विशाल ताराहरूको समुह (अझ यसको निहारिका (Orion Nebula) मा नयाँ ताराहरूको जन्म हुन्छ) त्यसको ज्योतिषमा कुनै महत्व छैन। उनीहरुको प्रभाव पनि अन्य राशिको सापेक्ष उस्तै हुनु पर्ने हो तर ज्योतिषले अन्य धेरै तारामण्डल लाइ महत्व दिएको छैन जवकि अन्य तारा मण्डलहरुका ताराहरु सापेक्षित विशाल, नजिक पनि छन् साथै तारामण्डल पनि ठूला छन्।
यसको कुनै व्यवस्थित तथा ठोस कारण ज्योतिषले दिएको छैन। ताराहरूको वर्गीकरण धेरै जटिल छ। जुन शास्त्रले सूर्यलाई ग्रहको रुपमा बुझ्छ त्यसबाट यति धेरै जटिलताको विश्लेषणको आशा गर्नु पनि हुँदैन।
ति तारामन्डलका सदस्य ताराहरु पृथ्वीबाट मात्र होइन एक आपसमा पनि धेरै धेरै टाढा छन जसको गुरुत्व तरङ्गहरु समेत कमजोर हुन्छन। ति ताराहरु निरन्तर गतिमा अर्थात लाखौं किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतीमा व्रम्हाण्डमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन। ति ताराहरु धेरै टाढा भएकाले ति स्थिर देखिएका हुन। निश्चित समय पछी ति ताराहरुको स्थान परिवर्तन हुन्छ र तारामण्डलको आकार पनि परिवर्तन हुन्छ। हजारौँ बर्ष अघी आकाशमा ताराहरुको अवस्थिती अर्कै थियो भने पछी पनि अर्कै हुनेछ।
जस्तो कि अहिले उत्तरको तारा जुन ध्रुव ताराको (Polaris) नामले चिनिन्छ अबको १२००० बर्ष पछी त्यस्को स्थान भेगा (Vega) भन्ने अर्को ताराले लिने छ भने अर्को १२००० वर्षमा पुन: Polaris ध्रुव ताराको रुपमा फर्किन्छ। यसरी Vega र Polaris लगातार करिब १२००० वर्षको अन्तरालमा आफ्नो स्थान परिवर्तन गरिरहन्छन्। त्यती बेला आकाशको अहिलेको ताराहरुको अवस्थिती पनि अर्कै हुनेछ। यसको कारण पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुम्दा २३.४ डिग्री (Axial tilt) ढल्केर घुम्छ त्यसैले पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको जुन अक्ष (Rotational axis) पनि वृत्ताकार आकारमा एक फन्को करिब २६००० वर्षको अन्तरालमा लगाउँछ।
पृथ्वीको Rotational axis को झुकाईले प्रत्येक १२००० वर्षमा ध्रुवतारा परिवर्तन हुन्छ।
यही ढल्काईको कारणले मौसम निर्धारण हुन्छ भने सूर्योदय हिउँद र वर्षायाममा अलग अलग स्थानबाट उदाउछ अर्थात् हिउँदमा उदाउने स्थान हल्का दक्षिण तिर सर्छ त्यसैले यसमा कुनै पनि शंका गर्ने स्थान छैन। त्यसैले ताराहरूको निरन्तर चाल र पृथ्वीको Axial tilt ले गर्दा आकाशको तारामण्डल को आकार प्रकार र अवस्थिति पनि निरन्तर परिवर्तन हुन्छ। यसले ज्योतिषको मुख्य आधारलाई नै अस्थिर तथा असङ्गत बनाउँछ साथै यो ज्योतिषको ईतिहास दावी गरे जस्तो लामो पनि छैन भन्ने पनि दर्शाउँछ।
हामीले बिना आधार कल्पना गरेर जनावर तथा वस्तुहरूको काल्पनिक आकार दिइएका ती राशिमण्डलहरु त्यसैको आधारमा कोई स्थिर स्वभावको राशि कोई चपल अर्थात् अस्थिर राशि भनेर भन्छौ। उदाहरणको लागि मकर राशि चपल, कुम्भ राशि स्थिर। उस्तै तारा हरुले बनेका यी राशी मण्डलहरू अर्थात् तारामण्डलहरु कसरी स्थिर या चपल हुन्छन्। कसरी उनीहरूको जनावर वस्तुहरूको गुणहरुलाई प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ? त्यसको आधार के हो?
यसको उत्तर व्यवस्थित उत्तर ज्योतिष सङ्ग छैन। मेष अर्थात् भेडो भएर चपल, कुम्भ घैटो भएर स्थिर जवकि ती राशिहरूको आकार त बिल्कुल काल्पनिक छ। हामीले बादललाइ हेरेर कोई घोडा कोई बाघ, कोई हिमाल जस्तो काल्पनिक आकार बनाउँछौं। त्यो बादल बाघ हो चपल छ, त्यो हिमाल हो त्यो स्थिर छ भन्नु कत्तिको वैज्ञानिक हुन्छ आफै विचार गरौँ।
जस्तो सिँह तारामन्डलको स्वामी सुर्य हो (जबकी सुर्य पनि एक प्रकारको तारा नै हो त्यो अन्य ग्रहहरु जस्तो होइन) मकर, कुम्भको स्वामी शनि हो। त्यो कसरी भयो भन्ने कुरामा पनि ज्योतिष सन्तोषप्रद उत्तर दिन सकेको छैन। ग्रहको अवस्थितीहरु चाँही जुन तारामण्डल सँगै जुन ग्रह हुन्छ त्यो त्यही राशीको हुन्छ।
ति उच्च निच हुने अवस्था के कारणले हुन्छ जस्तो सुर्य मेशमा उच्च हुने तुलामा निच हुने, शनि तुलामा उच्च र मेशमा निच हुने कारणहरु के हुन ति पनि उच्चारित गरिएको छैन। ज्योतिषले राशिहरू स्वामी र ग्रहहरूको गुण दोषको विचार पनि केही धार्मिक ग्रन्थका पात्रहरूको आधारमा गरेको छ। तर धर्म ग्रन्थका पात्र केही पृथ्वीका केही व्यक्तिहरू थिए भने तारा तथा ग्रहहरू भनेका आकाशीय पिण्डहरू हुन्।
हामीलाई थाहा छ ज्योतिषीय सिद्धान्तका आधारमा ग्रहहरू ९ वटा छन्। सुर्य, चन्द्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु र केतु। यो वर्गीकरण पूर्णतया हास्यास्पद छ। यही वर्गीकरणले ज्योतिषको खिल्ली उडेको छ। अब यही वर्गीकरणलाइ विश्लेषण गरौँ।
सुर्य: एक तारा
ज्योतिषले सूर्यलाई ग्रहको स्थानमा राखे पनि सूर्य ती राशिका सदस्य नक्षत्र जस्तै एक मध्यम आकारको तारा हो। यो विशाल हाइड्रोजन ग्यासको डल्लो हो जसले नाभिकीय संयोजन (Nuclear Fusion) बाट शक्ति उत्पन्न गरिरहेको छ जुन प्रकाश र तापको रुपमा अन्य ग्रहहरुले पनि प्राप्त गरिरहेका छन्। सम्पूर्ण सौर्यमण्डललाइ आफ्नो गुरुत्वशक्तिले नियन्त्रण गरिरहेको छ सम्पूर्ण सूर्य मण्डल चाहे बृहस्पति या शनि या कम्तीमा १ प्रकाशवर्ष भित्र रहेका हरेक आकाशीय पिण्डले सूर्यको परिक्रमा गर्छन्। सुर्य यति विशाल छ कि सूर्यमण्डलको सम्पूर्ण पिण्डको ९९.९६ प्रतिशत पिण्ड सुर्यसङ्ग मात्र छ।
अरु ग्रहहरू चाहे पृथ्वी होस् या बृहस्पति या शनि या अरुण या वरुण सबै वस्तुहरूको योगफल मात्र सूर्यको दाँजोमा ०.०४ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तो विशाल वस्तुलाइ ग्रह भनेर पृथ्वीको एक तिहाई भाग चन्द्रमा सङ्ग एउटै वर्गमा राख्नु कुनै पनि हालतमा वैज्ञानिक हुन सक्दैन। सूर्यको प्रभाव सङ्ग अरु ग्रहको प्रभावको कुनै तुलना नै हुन सक्दैन। सम्पूर्ण सौर्यमण्डल सूर्य आश्रित हो।
टेलिस्कोपको विकासले गर्दा हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो सौर्यमण्डल कम्तीमा १ प्रकाशबर्ष फैलिएको छ। त्यो अन्तिम घेरो जहाँ साना साना वस्तुहरू जो बरफजस्तै चिसा छन् त्यसले पनि सूर्यको परिक्रमा गर्छन जसलाई हामी काइपर बेल्ट (Kuiper belt) तथा ओर्ट बादल (Oort Cloud) भन्छौ। त्यो पनि हामी अहिले देख्न सक्छौँ।
हाम्रो सौर्यमण्डलको विस्तार
जव ज्योतिषको विकास हुँदै थियो सुर्य र चन्द्र सहित अन्य ७ वटा ग्रहको धारणा विकसित भयो। यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने राहु र केतु बाहेक अन्य पाँच ग्रहहरू नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्थ्यो त्यही नै ज्योतिषमा राखियो। ती हुन् बुध, शुक्र, मङ्गल, बृहस्पति र शनि। जबकि बुध, शुक्र, मङ्गल र स्वयम् पृथ्वी भन्दा ठूला २ ग्रहहरू सौर्यमण्डलमा अवस्थित थिए। ती हुन् अरुण (Uranus) र वरुण (Neptune)।
तिनीहरू नाङ्गो आँखाले नदेखिने भएकाले ती ज्योतिषमा अटाएनन्। टेलिस्कोपको विकासले गर्दा ती ग्रहहरू हाम्रो नजरमा आए। ज्योतिषको निर्माण यदि अहिलेको भन्दा बढी वैज्ञानिक सभ्यताले गरेको थियो भने ती २ ग्रह छुट्ने थिएनन्।
चन्द्रमा एक्लो छैन
चन्द्रमा पृथ्वीको एक तिहाई भन्दा थोरै सानो छ। यसलाई अन्य ग्रह त्यसमाथि सुर्य सङ्गै राख्नु एक प्रकारले हास्यास्पद नै हो। तैपनि चन्द्रमा यो हाम्रो सौर्य मण्डलमा एक्लो चन्द्रमा होइन। पृथ्वी बाहेक अरु ग्रहहरू जस्तो मङ्गल, बृहस्पति, शनि सङ्ग पनि चन्द्रमाहरू छन्। बृहस्पति र शनि सङ्ग त अनगिन्ती चन्द्रमाहरु छन्।
ग्यालिलियोले आफ्नो सानो टेलिस्कोपबाट नदेखिन्जेल बृहस्पतिका चारवटा विशाल चन्द्रमाहरुको जानकारी कसैलाई थिएन। अहिले हामीलाई थाहा छ मङ्गल सङ्ग २ वटा, बृहस्पति सङ्ग ७९ र शनि सङ्ग ८२ वटा कम्तीमा चन्द्रमा रहेका छन्। पृथ्वीको हाम्रो चन्द्रमा पाँचौं स्थानमा पर्छ। यो भन्दा ठूलो Ganymede (बृहस्पति), Titan (शनि), Callisto र Io (बृहस्पति) क्रमश: पर्छन्।
सौर्यमण्डलमा विशाल चन्द्रमाहरु छन् २ वटा त बुध ग्रह भन्दा पनि ठूला छन्
अझ Ganymede (२६३४.१ किमि अर्धव्यास), Titan (२५७४.७ किमि) त बुध ग्रह (२४३९ किमि) भन्दा ठूला छन् भने Callisto (२४१०.३ किमि) बुध जत्रै छ। त्यसैले पृथ्वीको चन्द्रमालाई महत्व दिएर ती ग्रह भन्दा पनि ठूला अरु चन्द्रहरुलाई नजरअन्दाज गर्न त पक्कै मिल्दैन। किन गरियो त?
उत्तर साधारण छ तिनीहरू नाङ्गो आँखाले देखिँदैन थिए। त्यसैले त विशाल ग्रहहरू अरुण र वरुण पनि छुटे। यसबाट हामीले के भन्न सक्छौं भने ज्योतिषको निर्माण अहिलेको भन्दा विकसित सभ्यताले गरेको थिएन।
राहु र केतु
खासमा राहु र केतु के हुन् भन्ने कुरा अहिले सम्म त्यति स्पष्ट छैन। ज्योतिषले यिनिहरुलाई छायाँ ग्रह भनेर भनेको छ। तिनीहरूको ज्योतिषले गणना गरेको अवस्थिति हेर्दा अहिले सम्म पत्तो लागेको छैन। भन्नलाई पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्ने कक्ष र चन्द्रले पृथ्वीलाई घुम्ने कक्ष एक आपसमा काटिएको बिन्दु भन्ने पनि गरिन्छ।
यसको कारणले सूर्य र चन्द्र ग्रहण लाग्छ र यी छायाँ ग्रह हो भनेको हुनाले कतै सूर्य र चन्द्र ग्रहणमा सूर्यमा र चन्द्रमा परेको छायाँलाइ त भनिएको होइन? भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुन्छ। हामीलाई थाहा भइसक्यो कि चन्द्रग्रहणमा पृथ्वीले सूर्यको प्रकाश छेक्दा पृथ्वीको छायाँ चन्द्रमामा पर्छ। सुर्य ग्रहणमा पृथ्वी र सूर्यको बीचमा चन्द्रमा आउँछ अनि चन्द्रमाले सूर्यको प्रकाश छेक्छ।
ग्रहहरूको व्यवहार र आपसी समन्धहरु पनि मिथकहरुमा नै आधारित छन्। जस्तो बुध चन्द्रमा र बृहस्पति पत्नी ताराको अवैध समन्धबाट जन्मिएको व्यक्तिको चित्रण गरिएको छ। शनिलाई सूर्य पुत्रको रुपमा चित्रित गरिएको छ।
गुजमुजे तारामण्डल (Pleiades) जो सात दिदीबहिनीका कथा, त्यसैको आडको अर्को तारामण्डल शिकारी तारामण्डल (Orion) अनि भालू तारामण्डल (Ursa Major) बीचका कथा उत्तर अमेरिकी रैथाने समुदायमा पनि चलेको पाइन्छ।
शिकारी (Orion) वृष (Taurus) तथा गुजमूजे (Pleiades) तारामण्डल जसको मिथक हरेक सभ्यतामा पाइन्छ।
राहु र केतु झुक्याएर अमृतपान गर्दा सूर्य चन्द्रको इशारामा गला काटिएको हुनाले सूर्य र चन्द्र ग्रहणमा राहु केतुको उपस्थितिको जनाइन्छ। सुर्य र राहु जब एउटै राशिमा अवस्थित भए ग्रहणदोष योगको विश्लेषण गरिन्छ। यसरी मिथकको आधारमा ग्रहको समन्ध, तारामण्डलका समन्धहरुको विश्लेषण गरिन्छ।
तारा हाइड्रोजनको डल्लो, चन्द्र र बुध चट्टानी पिण्डहरू हुन्। मिथकले ग्रह र तारामण्डलको बीचको समन्धहरु परिभाषित गर्ने कार्य वैज्ञानिक हुन सक्दैन।
यसरी ज्योतिषको राशि र ग्रह जस्ता आधारभूत संरचना नै वैज्ञानिक छैन। यसले तारामण्डलहरुको अवधारणा नै बुझ्न सकेको छैन भने ग्रहहरूको वर्गीकरण त झनै हास्यास्पद छ। त्यसैले फलित ज्योतिष जुन यस्तो अवैज्ञानिक विधिमा आधारित छ त्यसलाई विज्ञान मान्न सकिँदैन। कुण्डली निर्माण, ग्रहको अवस्थिति, चाल तथा संक्रमण र आपसी मैत्रिसमन्ध, आपसी योग समन्ध लगायत यसका अवैज्ञानिकताको विषय सहित यसका मनोवैज्ञानिक पाटोहरुको चर्चा लेखमा विस्तृत रुपमा गर्ने नै छु।
ब्रह्माण्डको एक वर्षे यात्रा
deepszeroJuly 18, 2021Astronomy, Carl Sagan, Cosmic Calendar No comments
हामीले यो ब्रम्हाण्डको आयु १३ अर्ब ८० करोडलाई १ बर्षको फ्रेममा झार्ने हो भने मान्छेले यो ब्रम्हाण्डमा आफ्नो हैसियतको पत्तो पाउछ र आफ्नो जन्म, आफ्नो सभ्यता आफ्ना भगवानहरु ज्ञान बिज्ञानहरु ब्रम्हाण्डको विशालताको अगाडि कती तुच्छ छन भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो।
यही प्रयास वैज्ञानिक Carl Sagan ले आफ्नो पुस्तक The Dragons of Eden (1977) मा गरेका छन् जसलाई हामी Cosmic Calendar भनेर चिन्छौ। Sagan ले यो ब्रह्माण्डको शुरुवात देखि अहिले सम्मको १३ अर्ब ८० करोड वर्षलाई एक वर्षमा घनीभूत गरेर अर्थात् जनवरी १ तारीखको शुरुवात मध्यरात ००:००:०० बजे बाट शुरू गरेर डिसेम्बर ३१ को मध्यरात २३: ५९:५९ मा अहिलेको समयलाई राखेका छन्। ब्रम्हाण्डमा घटेका प्रत्येक घटनालाइ त्यही एक वर्षको अन्तरालमा हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यही यात्रा हामी पनि शुरू गरौँ।
शुरु गरौ यो ब्रम्हाण्डको १ वर्षे यात्रा
यदी व्रम्हाण्डको सुरुवात १ जनवरी ००:०० मा BigBang बाट भयो भने अहिले हामी डिसेम्बर ३१ को सिमान्त मध्यरात्री अर्थात मध्यरात्री भन्दा केही शुक्ष्म समय अघी छौ। यो स्तरमा ४३७.५ बर्षको १ सेकेण्ड, १५ लाख ७५ हजार बर्षको १ घण्टा र ३ करोड ७८ लाख बर्षको १ दिन हुन्छ।
यसरी हामीले व्रम्हाण्डलाई हेर्ने हो भने १ जनवरी ००:०० मा बाट सुरु भएको हाम्रो व्रम्हाण्डमा १४ जनवरीमा पहिलो गामा किरणको प्रस्फोट(first Gamma ray bursts) भयो, २२ जनवरीको दिन पहिलो आकाशगंगा बन्यो, १६ मार्चको दिन हाम्रो आकाशगंगा Milky Way बन्यो भने २ सेप्टेम्बरमा सुर्यमण्डल अनी ६ सेप्टेम्बरमा पृथ्वीको चट्टानी स्वरुप बन्यो।
१४ सेप्टेम्बरमा पृथ्वीमा पहिलो जीवनको प्ररम्भिक अंश पैदा भयो, २१ सेप्टेम्बरमा पहिलो जीवनको Prokaryotes सुरुवात भयो। ३० सेप्टेम्बरमा सुक्ष्म बनस्पतिय जीवनले फोटोसेन्थेसिस Photosynthesis प्रकृया सुरु गर्‍यो जसले पृथ्वीको वातावरणमा २९ अक्टोबर सम्म अक्सिजनको आवश्यक मात्रा पैदा गर्‍यो। ९ नोवेम्बरमा बहुकोषको बिकास भयो भने ५ डिसेम्बरमा पहिलो बहुकोषिय जीवनको शुरुवात भयो।
१७ डिसेम्बरमा माछा, २० डिसेम्बरमा स्थल वनस्पती, २२ डिसेम्बरमा उभयचरहरु, २३ डिसेम्बरमा सरीसृपहरु, २५ डिसेम्बरमा डाइनोसोर, २६ डिसेम्बरमा स्तनधारी जनावरहरु, २७ डिसेम्बरमा चरा, २८ डिसेम्बरमा फूलहरु पैदा भए।
३० डिसेम्बरमा मानवको पहिलो पुर्खा, ३१ डिसेम्बरको बिहानको ६:०५ मा हाम्रो बादर पुर्खा, राती २२:२४ मा ढुङ्गाका औजार बनाउन मानिसले जान्यो, राती २३:४४ मा आगो बाल्न जान्यो, २३:५५ मा आधुनिक मानवको बिकास भयो, २३:५९:३२ मा बल्ल कृषिको बिकास भयो, २३:५९:४७ मा तामा पित्तलका भाडाकुँडा बनाउन जानियो, २३:५९:४९ मा लेख्न अक्षरहरुको बिकास भयो, २३:५९:५४ मा बुद्ध जन्मिए, २३:५९:५५ मा येशु, २३:५९:५६ मा मोहम्मद र ४३७.५ बर्ष देखी २३:५९:५९ लाग्यो र अहिले ००:०० बाट सिमान्त समयमा हामी छौ।
यो प्राणी मान्छे आधुनिक स्वरुपमा आएको ५ मिनेट भयो, यसका भगवानहरु कृष्ण डिसेम्बर ३१ को २३:५९:४९ तिर, २३:५९:५४ मा बुद्ध जन्मिए, २३:५९:५५ मा येशु, २३:५९:५६ मा मोहम्मद, यसका महान भनाउदा राजनीतिज्ञहरु जन्मेको २३:५९:५९ मै हो। यसरी जति पनि मानव सभ्यता छ त्यो ब्रह्माण्डको एक वर्षे अवधिको अन्तिम दिनको अन्तिम सेकेन्डमा घटित भएको हो।
यही एक सेकेन्डमा यस प्राणीले पृथ्वीको २ तिहाइ प्रकृति त सखाप पारिसक्यो। ५ सेकेन्ड देखी १० सेकेन्ड भित्र जन्मेका यस्का भगवानहरुको लागि यो आफू आफूमा युद्धरत छ। यसले बुझेकै छैन कि मानव सभ्यताको विकास पृथ्वीको जीवनको नगन्य समयमा भएको छ।
आँखा खोल साथी!
deepszeroJuly 12, 2021Poem, The Table Turned, Translation, W. Wordsworth No comments
उठ उठ मेरा साथी! त्याग ती सब किताबहरू
एक दिन निश्चय नै यसैको बोझले थिचिने छौ।
जाग साथी! धेरै पढाइले विचार र तथा चिन्तामा डुब्नुको साँटो आफ्नो मुहारलाई चम्काउ
यति धेरै मेहनत र कष्ट किन?
त्यो हिमालको शीरमाथिको त्यो सूर्यलाई हेर
उसको चमक कति मधुरो ताजापन दिनेवाला छ; सबै लामा हरिया खेतहरुमा फैलिरहेको छ, उसको पहिलो मिठो पहेँलो साझ
किताब! ती त रुखा तथा अन्तहिन विवादहरुले भरिएका छन्
आऊ! वनमा त्यो चरीको चिरबिर सुन
उसको संगीत कति मिठो छ; साँच्चै
उसमा कति धेरै ज्ञान भरिएको छ।
सुन त! कति आनन्द सँग त्यो चाँचर चरीले गाउँछ।
त्यो पनि कुनै उपदेशक भन्दा कम छैन
लौ! वास्तविकताको उज्यालोमा आऊ
प्रकृतिलाई आफ्नो गुरु बनाउ
जसले हाम्रो मन मुटु मष्तिस्कमा असल स्वास्थ्य द्वारा
प्राकृतिक रुपमै ज्ञान भरिदिन्छ,
सत्य हो हर्षोल्लासपूर्वक जिउँदो छ।
वसन्ती बनको एक तरङ्ग
जसले मनुष्यको बारेमा धेरै ज्ञान दिन सक्छ, राम्रो नराम्रोको बारे
जति विश्वका सबै सन्तहरूले दिन सक्छन्
प्रकृति जसले हामीलाई ज्ञान विज्ञान सिकाउँछ,
हाम्रो बुद्धिले तिनै सुन्दर वस्तुहरूलाई कुरुप बनाइदिन्छ
हाम्रो तिनै वस्तुहरूको विश्लेषणबाट उनीहरुलाई हामी मारिदिन्छौँ।
ज्ञान विज्ञान तथा कलाको धेरै कुरा भइसक्यो
किताबका ती रूखा पानाहरु बन्द गरिदेऊ
आऊ अघि बढ, खुला हृदय बोकेर आऊ
जसले यो देख्छ तथा ग्रहण गर्छ।
William Wordsworth (the table turned)
एउटा "बहुलाहा" र "आइमाई कुरा"ले बदलिदिएको भूगर्भशास्त्र
deepszeroJuly 11, 2021Continental Drift, Geology, Tectonic Plates, Tharp, Wegener No comments
आज सगरमाथाको उचाई, कालीगण्डकीको किनारमा भेटिएका शालिग्राम भनिने ढुङ्गाहरूमा कोरिएका चित्रहरू र आङ्ग सिरिङ्ग हुने गरी जाने भूकम्पका धक्काहरू आदिको बारेमा हामी धेरै जानकार छौ। अन्धविश्वासीहरुले जे भने पनि आज टेक्टोनिक प्लेट्स (Tectonic plates)हरुको आपसमा भएका लगातारको घर्षण नै यसको जिम्मेबार हो भन्नेमा आज कुनै शंका छैन।
आजभन्दा २५१ मिलियन देखि ६५ मिलियन वर्ष पहिले नेपाल मात्र होइन पुरै हिमालयको कुनै अस्तित्व थिएन। थियो त मात्र विशाल टेथिस सागर (Tethys sea)। दक्षिण तिरबाट लगातार सर्दै आएको भारतीय प्लेटले विशाल तथा सापेक्षित स्थिर युरेसियन प्लेटको मुन्तिर घुस्न थाल्यो अनि त्यही क्रममा हिमालयको रचना भयो। आज काली गण्डकीका किनारमा भेटिएका ती शालिग्रामहरु वृन्दाद्वारा श्रापित विष्णुका अवतार होइनन् ती त्यही टेथिस सागरमा समुन्द्री जिवका जिवाषेशहरु हुन्।
यहाँ मात्र होइन यो पृथ्वीमा स्थित चाहे महादेशहरु हुन् या महासागरहरु हुन् सबै तिनै टेक्टोनिक प्लेट्स माथि अवस्थित छन्। तिनीहरूको निरन्तर गतिशीलताले पृथ्वीको भौगोलिक आकार परिवर्तनशील छ। आज यो कुरा हामीलाई सामान्य लाग्छ तर आज भन्दा सय वर्ष अघि यो कुरो हास्यास्पद ठानिन्थ्यो। जब एउटा साधारण जर्मन भूगर्भशास्त्री अल्फ्रेड वेजनरले Alfred Wegener (१८८०–१९३०) ले यसको प्रस्ताव राख्दा वैज्ञानिक जगत समेतले बहुलाहा भन्दै उनको खिल्ली उडाएको थियो।
अल्फ्रेड वेजनर : Alfred Wegener
कथा त्यतिबेला शुरू हुन्छ जब मौसमविद् तथा भू विज्ञानी Alfred Wegener ले अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिका महादेशको नक्शा हेर्दै थिए। उनलाई कता कता ती महादेशहरुका आमुन्ने सामुन्नेका किनारहरू एक आपसमा ठ्याक्क मिल्छन् जस्तो लाग्यो जसरी jigsaw 🧩 पजलका टुक्राहरु मिलाए जस्तै गरी। हुन पनि दक्षिण अमेरिकाको पूर्वी किनारा र अफ्रिका महादेशको पश्चिम किनारालाई आपसमा मिलाइदिने हो भने ती आपसमा फिट हुन्छन्। फेरि दुवै महादेशमा ती किनारहरुमा पाइने जिवाशेषहरु मात्र नभई वनस्पति र जिवहरुमा भएको समानता देखेर उनलाई लाग्यो यो विशाल आन्ध्र महासागरका दुई किनाराहरु एक आपसमा टुक्रिएर सर्दै सर्दै गएर हालको अवस्थामा आइपुगेका हुन्।
उनले त्यो दुई महादेश मात्र नभई अहिले रहेका सबै महादेशहरुको अध्ययन गर्दै उनले के परिकल्पना गरे भने यी सबै महादेशहरु शुरुमा एकै ठाउँमा जोडिएको विशाल महादेश हुनु पर्छ। उनले त्यो विशाल महादेशको नाम Pangaea प्यान्जिया राखे जुन प्राचीन ग्रीक भाषाबाट व्युत्पत्ति भएको हो जसको अर्थ हुन्छ "सम्पूर्ण जमीन।"
विशाल महाद्वीप प्याञ्जिया
Wegener का अनुसार करोडौँ वर्षको अन्तरालमा त्यो विशाल महादेश टुक्रीएको हुनुपर्छ र बिस्तारै बग्दै या सर्दै छुट्टिएर अहिलेको जस्तो संरचना बनेको हो। Wegener को यो प्रस्ताव १९१२ मा जव आयो तव अन्य क्षेत्र मात्र नभई विज्ञान कै क्षेत्रमा नै सबै भन्दा हास्यास्पद कुरा बन्यो। कसैले यो कुरामा चासो दिएनन्, समयको अन्तरालमा त्यसलाई भुलाइयो।
अहिले विभिन्न तथ्यगत प्रमाणहरू हुँदा हुँदै त अझै पनि अन्धविश्वास अझ विशेष गरी धार्मिक अन्धविश्वासमा परेर कतिपय प्राकृतिक परिघटनाहरुलाई दैवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दै खिल्ली उडाइन्छ भने त्यो त कसैले कल्पना गर्न नसकेको परिकल्पना थियो। विशाल आन्ध्र महासागर अनि विशाल महादेश हेर्दै त्यो सर्दै गएर त्यहाँ पुगेको भनेर किन मानिसहरू पत्याउँथे र। यहीँ पनि शालिग्राम विष्णुको अवतार होइन समुन्द्री जीवको जिवाशेष हो भन्यो भने अहिले युरोपियन दलाल देखि धर्म विरोधी बिल्ला लगाउन मानिसहरू तयार नै छन्। त्यस्तै अन्धविश्वास हिमालय पर्वतको रचना देखि भूकम्प सम्म छ। शिक्षित र विज्ञानकै क्षेत्रका मान्छेहरूले सगरमाथाको उचाइको .८६ मीटरको खिल्ली उडाएको धेरै समय भएको छैन। जसले भूगर्भ विज्ञानमा ठूलो महत्व राख्छ।
शालिग्राम : समुन्द्री प्राणीका जिवाशेषहरु हुन्, जसलाई विष्णुको अवतारको रुपमा पुजिन्छन्
जसरी पृथ्वीको सुदुर गहिराइमा भएको निरन्तर हलचल जसले बाहिरी सतहमा देखिएका विशाल भूखण्डहरुलाई निरन्तर चलायमान गराइरहन्छन् र नवनिर्माणको प्रक्रिया चलिरहन्छ त्यस्तै Wegener को मस्तिष्कमा पनि त्यस्तै हलचल चल्यो होला जब उनले दुई महादेशका किनारा देखे होलान्। पृथ्वीको गर्भमा हुने विभिन्न प्रक्रियाले विशाल महादेश प्यञ्जिया टुक्रेर अहिलेको अवस्थामा आएको हो भन्ने उनको परिकल्पना बाहिर निस्किँदा पुराना कति मान्यताहरुको जग हल्लियो जसरी कपर्निकस र ग्यालिलियोको कुराले चर्चका जग हल्लिएका थिए। प्रतिक्रिया त्यस्तै भयो।
Wegener सबैको लागि बहुलाहा सावित भए। आलोचना र ठट्टा–मजाकको एउटा पात्र जसले जताततै भोग्ने त छँदै छ व्यङ्ग बाण र उपहासको सामना त वैज्ञानिक जगतमा पनि गर्नु पर्यो, चार्ल्स डार्विनका क्रम विकासका सिद्धान्त देखि जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा जसरी अहिले प्रतिक्रियाहरु भेटिन्छन्।
हुन त ब्राजिल एक समयमा विशाल आन्ध्र महासागर पारी पश्चिम अफ्रिकाको भाग नाइजेरिया क्यामरुन सङ्गै थियो भन्दा चित्त बुझाउन पनि गाह्रो नै हुन्थ्यो होला। चरम उपहास र आलोचना झेले पछि उनका गुरु र हुनेवाला ससुरा Wladimir Köppen ले अहिले नै यसरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त होला र? सुझाव दिएका थिए। Wegener ले जवाफ दिएका थिए, "पुराना मान्यताहरुलाई बाहिर हुर्राई दिन संकोच गर्नु हुँदैन यदि त्यहाँ स्पष्ट आवश्यकता देखियो भने चाहे त्यसको लागि जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परोस्।"
उनी Marburg University का अवैतनिक प्राध्यापक थिए त्यो पनि उनको विशेषज्ञता भूगर्भशास्त्रको होइन उनी त मौसम विज्ञान र अन्तरिक्ष विज्ञानको थियो। आफ्नो विषय भन्दा बाहिर गएर पृथ्वीको नक्साको तस्बिर काटेर एक आपसमा जोडेर यो पहिला एउटै महादेश हुनु पर्छ भन्नु एक प्रकारको हास्यास्पद पागलपन नै हुन सक्छ। तर Wegener विषयगत सीमा भन्दा बाहिर निस्कन चाहन्थे। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र जस्तो कठिन क्षेत्रको गहन अन्वेषण गरेका Wegener त्यसै हार मानिहाल्ने मान्छे पनि कहाँ थिए र।
उनले महादेशहरुका नक्साहरू काटेर एक अर्कोमा मिलाएर विशाल महादेश प्याञ्जियाको आकारको परिकल्पना मात्र त कहाँ गरेका हुन र, उनले छुट्टाछुट्टै महादेशका समुन्द्री किनारका प्राणी तथा वनस्पतिहरूको तथ्य पनि जम्मा गरेका थिए। अष्ट्रेलिया र दक्षिण अमेरिकी Marsupials (ती स्तनधारी प्राणी जसले बच्चालाई पेटमा रहेको थैलीमा राखेर हुर्काउँछन् जस्तो कङ्गारु) प्राणिहरूमा समानता थियो भने उनीहरूलाई रहने परजीवी फित्ते जुकाहरुको संक्रमण समेत उस्तै थियो। त्यसैले उनले यो दावी गरे कि यो विशाल महादेशलाई पृथ्वीको कुनै शक्तिले पत्रिका च्याते जस्तै धरर च्यातेको हो।
प्राणी तथा वनस्पतिहरूको विस्तारलाई एउटै महाद्वीपीय व्याख्या गर्न सकिन्छ
Wegener ले यो प्रक्रियालाई Continental Displacement (महाद्वीपीय विस्थापन) भन्दै Frankfort Geological Association मा १९१२ को लेक्चरमा प्रस्तुत गरे। यसमा त्यति साह्रै कसैले गम्भीर ध्यान दिएनन्। उनले यसलाई एउटा आर्टिकल को रुपमा पनि छपाए तर उपहास बाहेक कुनै गम्भीर ध्यान कसैको त्यसमा पनि गएन। पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पक्षमा युद्धमा भाग लिँदा उनी घायल भएका थिए।
उपचार पश्चात उनले १९१५ मा यसको पृथ्वीको यो अद्वितीय प्रक्रियाको बारेमा एउटा पुस्तक लेखे The Origin of Continents and Oceans जुन जर्मन भाषामा थियो र पछि १९२२ मा यो अङ्ग्रेजीमा पनि छापियो। त्यस पछि त मानौँ बम नै विस्फोट भयो। विश्वयुद्धमा पराजित जर्मनको लेखाइ त्यो पनि महाद्वीपको सराई Continental drift सबै तिर बाट तिखो प्रतिक्रिया र उपहास आउन थाल्यो।
Wegener ले बनाएको Continental drift को नक्सा
बाहिर त जर्मनीलाई यसै घृणा गरिन्थ्यो जर्मनी भित्रै पनि यो विचारलाई Moving Crust Diseases, Wandering Pole Plague भनेर उपहास गरियो भने ब्रिटिशहरुले काजग काटेर महादेशको निर्माण गरे जस्तो साँच्चैको गर्नको लागि शक्ति पृथ्वीमा कसरी पैदा हुन्छ भनेर उपहास गरियो भने Royal Geographical Society मा "शायद त्यो शक्ति Professor Wegener आफैले आत्मघाती विस्फोट पो गरेर दिएका हुन कि" भन्दै उपहास गरियो।
अझ अमेरिकीहरू यसमा अझै कडा प्रतिक्रिया जनाउथे। यसलाई जर्मन छद्म विज्ञान (German Pseudoscience) भन्थे र Wegener आफै यसको नशामा लठ्ठिएका छन्। Chicago का भूगर्भ शास्त्रीहरु त भन्थे Wegener को कुरो पत्याउने हो भने त हामीले ७० वर्षमा जे जे सिकेका छौ ती सबै रद्दीको टोकरीमा फालिदिए हुन्छ।
अब Wegener को त्यो परिकल्पनालाई उनीहरूले एक काल्पनिक परीको कथा नै बनाइ छाडे। दोस्रो विश्वयुद्ध ताका सम्म पनि पुराना भूगर्भशास्त्रीहरु नयाँ आउनेहरुलाई Wegener को महाद्वीपको सराईको सिद्धान्तमा रुचि देखाउनु मात्र पनि तिमीहरूको भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्दथे।
Wegener यी उपहास र आक्रमणबाट विचलित त भएनन्। बरु आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै लगे। उनले सकेसम्मको प्रमाणहरू जुटाउँदै चाहे ती जैविक हुन् या भुगर्भिय क्रियाकलापहरू नै हुन् आफ्नो सिद्धान्तलाइ लगातार परिमार्जन गर्दै लगे। १९२९ मा यसको अन्तिम संस्करण प्रकाशित गरे।
१९३० मा ग्रीनल्याण्डमा एक वैज्ञानिक अभियान कै क्रममा उनको मृत्यु भयो। उनी सङ्गै गएका साथी Rasmus Villumsen ले उनीलाई त्यही हिउँमा समाधिस्त गरेर अघि बढेका रहेछन् र उनी पनि हिउँमै हराए। छ महिना पछि उनका भाइले Wegener को समाधि पत्ता लगाए अनि १०० मीटर पर उनको डायरी।
Greenland मा आफ्ना साथी Villumsen सङ्ग Wegener आफ्नो अन्तिम वर्षमा
उनी अत्यधिक धूम्रपान गर्थे र उनको मृत्यु हृदयाघातबाट भएको थियो। उनको मृत्यु हुँदा उनी ५० वर्षका थिए। उनको शव फेला पार्दा भनिन्छ उनको आँखा खुल्ला थियो मुहारमा मुस्कुराएको जस्तै शान्ति थियो। उनी सङ्गै गएका साथी Villumsen मात्र २३ वर्षका थिए। दुवै ग्रीनल्याण्डको हिउँमा जीवन बिसाए।
उनको यो महाद्वीपीय सराईको अवधारणा फेरि चर्चामा आयो। युद्धमा प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रविधिहरु वैज्ञानिक अध्ययनको लागि प्रयोगमा ल्याउने क्रम बढ्दै थियो। कतै आणविक हतियारको परीक्षण तथा प्रयोग पत्ता लगाउन भूकम्प मापन गर्ने Seismometers, पनडुब्बीहरु पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिने Magnetometers हरुका तथ्यहरु वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि पनि उपलब्ध हुन थालेका थिए।
यी प्रविधिहरूको प्रयोगले वैज्ञानिकहरुले के पत्ता लगाए भने भूकम्पहरु पृथ्वी भरी जहाँ तहाँ समान रूपले जाँदैनन्। केही क्षेत्रहरूमा भूकम्पहरु आश्चर्यजनक रूपले अत्यधिक जान्छन् भने समुन्द्रको गहिराईहरुमा पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रमा विचित्रको विविधता छ।
अब अनुसन्धानकर्ताहरुले Wegener का अवधारणाहरु सङ्ग मिल्दो तथ्यहरु पत्ता लगाउन थाले जसले पृथ्वीको crust साधारणतया २० वटा टेक्टोनिक प्लेट्समा विभाजित भएको हुनुपर्छ भन्ने तिर इङ्गित गरेको थियो।
ज्वालामुखीबाट समुन्द्रमा मिसिएको लाभा (Lava) सेलाउँदा कतिपय खनिजहरू पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र अनुसार निश्चित दिशामा फर्किएका हुन्छन्। त्यसको अध्ययनबाट के थाहा भयो भने पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रमा कालान्तरहरुमा परिवर्तन भइरहेछ जसले पृथ्वीको सुदुर गहिराइमा निरन्तर हलचल छ जसले टेक्टोनिक प्लेट्सलाइ चलायमान गराइरहेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् "पृथ्वी: निरन्तर गतिशीलता"
जब टेक्टोनिक प्लेट्स र महाद्वीपीय सराईको कुरा जव आउँछन् एउटी महिला वैज्ञानिकको नाम पनि सङ्गै आउँछ। उनी थिइन् अमेरिकी भूगर्भविद् Marie Tharp(१९२०–२००६)। Wegener को अवधारणाले चर्चा पाउनुको पछाडि एउटा नक्साको विशेष हात रहेको भन्न सकिन्छ। त्यो नक्साले हामीले यो पृथ्वीलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई सम्पूर्ण रुपमा परिवर्तन गरिदियो भन्न सकिन्छ।
१९५३ मा एक युवा भूगर्भशास्त्री Marie Tharp ले समुन्द्रको पिँधको नक्सा कोरेकी थिइन् जसले Wegener को महाद्वीपीय सराईको (Continental drift) अवधारणालाई पूर्ण रुपमा समर्थन गर्थ्यो।
१९२० मा अमेरिकामा जन्मिएकी Marie Tharp का पिता U.S. Department of Agriculture मा कार्यरत माटोको सुपरिवेक्षक थिए।त्यही पृष्ठभूमिले उनलाई पनि माटो सङ्ग जोडेको हुनु पर्छ। त्यो समय महिलाहरुलाई अन्य क्षेत्रमा त परै जाओस्, विज्ञानकै क्षेत्रमा पनि सहज रुपमा स्वीकार गरिदैनथ्यो।
१९२० देखि १९७० सम्मको अवधिमा जम्मा ४ प्रतिशत महिलाहरुले भूविज्ञानको क्षेत्रमा विद्यावारिधी थिए। विज्ञानका सबै क्षेत्रमा त्यस्तै हालत थियो। विज्ञानका क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरु पनि बाहिर देखिँदैनथे या समुह या संस्था आफैले देखिन दिँदैनथ्यो। तैपनि उनी असाधारण प्रतिभा भएकाले नै होला, उनीले आफूलाई अब्बल उभ्याएकी थिइन्।
१९४० को विश्वयुद्धका बेला उनीले काम गर्ने अवसर पाइन्। University of Michigan बाट भू विज्ञानमा स्नातकोत्तर गर्न सफल भएकी उनी पुरुषहरूले समेत झन्झट मान्ने भूगर्भविद् को भुमिकामा आफूलाई उभ्याएकी थिइन्। त्यो बेलाको समयमा Wegener को अवधारणाले सबैको टाउको तताएको थियो। Wegener को आलोचनामा सबै भन्दा बढी कस्सिएर लागेका अमेरिकी भूगर्भविद्हरु नै थिए। पृथ्वीको क्रस्टको बाहिरी सतह भन्दा भित्र त्यति अध्ययन गरिएको पनि थिएन न समुन्द्रको पिँधको नै कुनै अध्ययन गरिएको थियो।
Lamont lab का संस्थापक Maurice Ewing लाइ कार्यालय र म्युजियम भित्र बसेर भौगर्भिक अध्ययन गर्न अब दिक्क लागि सकेको थियो। उनले अब अध्ययन समुन्द्रको पिँधमा हुने भौगर्भिक क्रियाकलापलाइ तत्कालीन प्रविधिको सहायताले सम्पन्न गर्ने तर्फ बढाए। Sonar (sound navigation and ranging) को प्रयोग युद्धक्षेत्रमा धेरै प्रयोगमा आइसकेको थियो। Lamont lab अब समुन्द्रमा थियो अर्थात् आन्ध्र महासागर।
Tharp त्यही प्रयोगशालाको टेबलमा सीमित भइन्। उनको काम Sonar बाट प्राप्त तथ्यलाई चित्रमा अर्थात् नक्सामा उतार्नु थियो। यो कार्यको लागि उनी सङ्गै अर्का भूगर्भविद् थिए Bruce Heezen जो Sonar तथ्यहरु सङ्कलन गर्थे अनि Tharp लाइ दिन्थे। Tharp को काम ती तथ्यलाई चित्रमा उतार्नु थियो जुन उनले निरन्तर गर्दै गईन्।
आन्ध्र महासागरको पिँधको नक्सा बिस्तारै उनको अगाडि खुल्दै थियो। तव उनले आफ्नो क्यानभासमा एउटा आश्चर्यजनक संरचना बिस्तारै नक्सामा खुल्दै गएको देखिन्: ओह! विशाल उपत्यका, महासागरको पिँधमा रहेको विशाल पर्वतश्रृङ्खला बीचमा छ यस्तो लाग्छ पृथ्वीको क्रस्ट बिस्तारै च्यतिँदै गइरहेको छ। उनीले झट्ट Wegener र उनको महाद्वीपीय सराईको अवधारणा सम्झिईन् तव पृथ्वीको त्यो प्रक्रिया उनको अगाडी प्रत्यक्ष प्रमाण सहित उनको क्यानभासमा थियो। उनले धेरै पटक तथ्यहरु पुन: परीक्षण गरिन् तर पनि नतिजा त्यही आयो।
Marie Tharp ले बनाएको समुन्द्री पिँधको नक्सा जहाँ विशाल पर्वत श्रृङ्खला हरू देखिन्छन्
उनले त्यो कुरा Bruce Heezen लाइ सुनाइन्। १९९९ मा उनले लेखेको निबन्धमा उनी सम्झिन्छिन्, "जब मैले नक्सा Bruce लाइ देखाएँ, उसले ह्या! यो हुनै सक्दैन, यस्ता 'आइमाई कुरा' भनेर तुरुन्त अस्वीकार गर्यो।" उनले आफ्ना दाजुलाई यो कुरा सुनाइन्, दाजुले Wegener को अमेरिकी आलोचना नजिकबाट देखेका हुनाले बहिनीको हालत पनि त्यस्तै नहोस् चाहन्थे त्यसैले उनले धेरै परीक्षण पश्चात मात्र बोल्नु भन्ने सल्लाह दिए।
त्यसपछिका दिनमा एक वर्षसम्म लगातार Tharp काे कामको परीक्षण र नक्सा हेरे पछि Bruce पनि विश्वस्त भयो कि यो Wegener ले भने जस्तै महाद्वीपीय सराई (Continental drift) नै हो। Wegener को अवधारणा सही छ। जुन उपत्यका Tharp ले पत्ता लगाइन् त्यो पृथ्वीको सबै भन्दा ठूलो संरचना अन्तर्गत पर्छ।
Heezen ले १९५६ मा यो अनुसन्धानको प्रकाशन जब गरे त्यसको सबै श्रेय आफैले लिए। ती बेलाका अन्य अनुसन्धानमा जस्तै महिलाहरु पृष्ठभूमीमै अड्किए। उनी आफ्नो निबन्धमा भन्छिन्, "एउटा तस्विरले लाखौँ शब्द भन्दा बढी बोल्छ र त्यही हेरे पछि विश्वास हुन्छ।" अर्थात् Seeing is believing।
Marie Tharp 2006
अहिले त हामी सङ्ग यति धेरै प्रविधि र तथ्यहरु छन् कि कम्प्युटर सिमुलेशन गरेर प्रत्येक कालखण्डमा महाद्वीपहरु कस्ता थिए, कसरी टेक्टोनिक प्लेट्सको गतिशीलताले कुन कालखण्डमा कस्तो हुन्छ सजिलै भनिदिन सक्छौ। अहिले पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेका सयौँ भू उपग्रहहरुको तथ्यहरूले अहिले पृथ्वीको सरञ्चनाहरुको हरेक क्रियाकलापहरू स्पष्ट गर्न सकिन्छ। हामी पृथ्वीका सुदुर गहिराईहरुका रहस्यहरु बिस्तारै खुलाउँदै छौ।
अबको २५० मिलियन वर्ष पछि यी महाद्वीपहरु फेरि एकै ठाउँमा जुट्ने छन् त्यसलाई हामी Wegener ले जस्तै Pangaea Proxima भन्छौँ। त्यतिबेला ठूला ठूला पर्वत शृङ्खला पनि बन्लान् जव अफ्रिकी टेक्टोनिक प्लेट युरोपेली टेक्टोनिक प्लेट सङ्ग घर्षण गर्ला। हामीलाई अहिले ठ्याक्कै भन्न त सक्दैनौँ तैपनि टेक्टोनिक प्लेट्सको गतिशीलताले सबै महाद्वीपलाई एकै ठाउँ Pangaea Proxima मा जोडिदिने छ Wegener लाइ पनि।
पृथ्वी: निरन्तर गतिशीलता
तपाईँले jigsaw 🧩 puzzle खेल्नु भएको छ। हामी बोर्डमा विभिन्न टुक्राहरूलाई यता उता सार्दै एउटा निश्चित चित्र बनाउँछौँ। त्यस्तै झै पृथ्वी पन...
सिन्धु सभ्यताको विनाश : जलवायु परिवर्तन?
जलवायु परिवर्तनले प्राचीन सभ्यताहरूको उत्थान र पतनमा निकै उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। बसाइँसराइ देखि खेतीको प्रकार र खानपान रहनसहन समेतमा यसक...
पृथ्वी: एक जीवन्त ग्रह
विभिन्न ठाउँमा रहेका तातो पानीका कुण्डहरुमा नुहाउँदा धेरै रोगहरू निको हुन्छन् भन्ने विश्वास नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै रहेको पाइन्छ। जमी...
नियात्रा: निरन्तर यात्रा
एउटा सानो हिमाली देशबाट
देउराली, चिती, लमजुङ्ग, गण्डकी , Nepal
Copyright © नियात्रा: The Journey Continues | Powered by Blogger